နှာထခငျြကွတာ – My Blog
ဇနျနဝါရီလ ၅ ရကျနေ့ ၊ စနနေေ့ ဖွဈသညျ..။ သညျနသေ့ညျရကျဟာ အခွားသူတှေ အတှကျတော့ ထူးခွားမညျ မဟုတျသျောလညျး ကိုခငျကြျောနှငျ့ မအေးအေးဝငျးတို့အတှကျတော့ ထူးခွားသညျ့နေ့ ရကျ တဈရကျ ဖွဈသညျ..။ သူတို့နှဈယောကျ အိမျထောငျကသြညျမှာ နှဈ နှဈကြျောသာ ရှိသေးသညျ..။ ခဈြလို့ ခငျလို့ ခလြို့ လိုးလို့ မဝသေးပဲ ကောငျးတုနျး…။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ လငျမယားနှဈယောကျ ခဈြတငျးနှီးနှော ကာမစပျယှကျကွရသညျ့ အခြိနျမြားက နညျးပါးလှသညျ..။ ဒါကလညျး ကနျြးမာရေ ခြို့တဲ့နကွေလို့ မဟုတျ..။ သူတို့၏ ကွီးပှားရေး စီးပှားရေး လုပျငနျးမြားကွောငျ့ ဖွဈသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ အငျဂငျြနီယာဘှဲ့ရ တဈယောကျဖွဈကာ အစိုးရဌာနတဈခုတှငျ အရာရှိမ တဈယောကျအဖွဈ အလုပျ လုပျကိုငျနသေညျ..။
ခငျမောငျကြျောကတော့ အစိုးရ အလုပျမလုပျ..။ ကိုယျပိုငျ အရောငျးအဝယျ အလုပျသာ လုပျသညျ..။ အသကျအရှယျကလညျး ငယျ ၊ လုပျရညျကိုငျရညျကလညျး ကောငျး ၊ အသိုငျးအဝိုငျးကလညျး ကောငျးသညျ့အတှကျ စီးပှားဖွဈခဲ့သညျ..။ ငှတှေရေသလောကျ အလုပျကိုလညျး နနေ့ညေ့ညဆိုသလို ကွိုးစားလုပျကိုငျခဲ့ပရော ၊ ခငျမောငျကြျောမှာ မယားခြောလေးနဲ့အတူ ကာမစပျယှကျရနျ အခြိနျ မပေးနိုငျခဲ့..။ သို့ပမေယျ့ လတဈလ၏ ပထမဆုံးသော စနနှေငျ့ တနင်ျဂနှနေမြေ့ားတှငျတော့ လုံးဝ အားလပျခှငျ့ယူကာ လငျမယားနှဈယောကျလုံး လိုးကွဆျောကွဖို့ ရကျသတျမှတျထားခဲ့ကွသညျ..။ ထိုနှဈရကျတှငျ ခငျမောငျကြျောသညျ စီးပှားရေး အလုပျမြားကို ရပျနားသညျ..။
အိမျရှိ ထမငျးခကျြနှငျ့ အိမျဖျော မိနျးခလေးတို့ကိုလညျး အားလပျခှငျ့ ပေးလိုကျသညျ..။ အေးအေးဝငျး၏ ကားကို မောငျးသော ဒရိုငျဘာ ကြျောမိုးသာလငျြ အိမျတှငျ ရှိသညျ..။ သို့သျော ကြျောမိုး၏ ကားဂိုဒေါငျမှာ အိမျနှငျ့ သီးခွားဖွဈပွီး ကြျောမိုးသညျ ကားဂိုဒေါငျ အပျေါ ထပျခိုးပျေါတှငျ နရေသောကွောငျ့ အေးအေးဝငျးနှငျ့ ခငျမောငျကြျောတို့နှဈယောကျမှာ အိမျပျေါတှငျ လှပျလှပျလပျလပျနှငျ့ စိတျတိုငျးကြ အပြျောကွူး ကာမစပျယှကျနိုငျသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ မွနျမာ အမညျခံယူထားသျောလညျး တရုပျမ တဈယောကျ ဖွဈသညျ..။ ခတျေပညာတတျ သျောလညျး အရှကျအကွောကျ ကွီးသညျ..။ အေးအေးဝငျး၏ မိဘမြားသညျ ရှေးဆနျသော တရုတျမိသားစုမြား ဖွဈကွပရော အေးအေးဝငျးကို အထူးပငျ ကွပျမတျအုပျထိနျးထားခဲ့ကွသညျ..။
ခငျမောငျကြျောသညျ အေးအေးဝငျးကို ကာမစပျယှကျမှုသညျ ရှကျစရာ မဟုတျကွောငျးနှငျ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဆကျဆံရနျအတှ ကျ တျောတျောလေးပငျ ပွောဆိုစညျးရုံးခဲ့ရသညျ..။ ခငျမောငျကြျောအဖို့ ဇနီးခြောလေးကို ကိုယျလုံးတီးခြှတျ၍ ကာမစပျယှကျနိုငျသညျမှာ သုံးလပငျ မပွညျ့သေး..။ လီးစုပျပေးရနျကိုကား တစစ ပွောဆို သိမျးသှငျးနရေဆဲ ဖွဈသညျ..။ တရုတျမလေး အေးအေးဝငျးကို ကာမစပျယှကျရာတှငျ ပှငျ့လငျးရဲတငျးလာရနျ စညျးရုံးသိမျးသှငျးရာတှငျ ခငျမောငျကြျောက အပွာကားမြားကို အသုံးခခြဲ့သညျ..။ ပထမတှငျ ခပျကွမျးကွမျး နမျးစုပျခနျး ၊ ဝတျလဈစလဈ ပှဖေ့ကျကိုငျတှယျခနျးမြား ပါသညျ့ ကားတှကေို ပွသညျ..။ ထို့နောကျ ဂပြနျကားမြားကို ပွကာ သိမျးသှငျးသညျ..။ နောကျတော့မှ သိပျမကွမျးသညျ့ အပွာကားမြားကို ပွခဲ့သညျ..။ အပွာကား စပွသညျ့နကေ့ ခငျမောငျကြျောအဖို့ မိမိ၏ လီးအား အေးအေးဝငျးကို လကျဖွငျ့ စ၍ ကိုငျတှယျပေးစနေိုငျခဲ့သညျ..။
နောကျတော့ ဆုပျကိုငျ ဂှငျးတိုကျပေးသညျ့အဆငျ့ထိ အောငျမွငျခဲ့သညျ..။ ယနတှေ့ငျတော့ အေးအေးဝငျးကို လီးစုပျခိုငျးရနျ နှငျ့ အခှငျ့သာမညျ ဆိုပါက ဖငျကိုပါ လိုးရနျ ခငျမောငျကြျောက ကွံရှယျထားသညျ..။ ထို့ကွောငျ့ လီးစုပျခနျးနှငျ့ ဖငျဆျောခနျးမြား ခပျကွမျးကွမျး ပါဝငျသညျ့ အပွာကားထုပျကို အထူးရှေးခယျြကာ ငှါးရမျးလာခဲ့သညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ ခုမှ အသကျ ၂၅ နှဈခနျ့သာ ရှိသေးသညျ..။ အသားဖွူဝငျးကာ ရငျထှားထှား ၊ တငျကားကား ၊ ပေါငျလုံးတုတျတုတျနှငျ့ ကိုယျကာယ အထူးပငျ တောငျ့တငျး ဖှံ့ထှားသညျ..။ ကနျြးမာရေးကောငျးကာ သှေးသား ဆူဖွိုးလကျြ တရုတျမပီပီ နှာလညျး ထနျသညျ..။ တငျးတငျးကွပျကွပျ အုပျထိနျးခွငျး ခံခဲ့ရသညျ့အတှကျကွောငျ့သာ အရှကျအကွောကျ ကွီးနခွေငျး ဖွဈသညျ..။
ခငျမောငျကြျောက အပွာကားတှေ ပွသကာ သိမျးသှငျးသညျတှငျ အေးအေးဝငျးမှာ ရမ်မကျစိတျတှေ ထကျသနျ တကျကွှလာရသညျ..။ ဤတှငျ သူမကိုယျတိုငျကလညျး ခဈြခငျပွီး တရားဝငျ လကျထပျယောကျြားလညျး ဖွဈသော ခငျမောငျကြျောထံမှောကျတှငျ အရှကျအကွောကျတှကေို တဈထဈခငျြး ဖွလြှေော့ပေးခဲ့သညျ..။ ဗွုနျးစားကွီး ရကျရကျရောရော ကာမစပျယှကျမှုကို မပွုရဲ သျောလညျး တစစတော့ ခငျမောငျကြျော၏ စိတျတိုငျးကြ လိုကျလြောလာရပေးမညျ..။ ခငျမောငျကြျောမှာလညျး အသကျ ၂၈ နှဈခနျ့ ရှိကာ တရုတျအစဈ မဟုတျသျောလညျး တရုတျကပွားတဈယောကျဖွဈသညျ..။ ကာမအားလညျး သနျသညျ..။ နံနကျ ၁၀ နာရီ ………..။ ခငျမောငျကြျောနှငျ့ အေးအေးဝငျးတို့ လငျမယားသညျ ခုတငျခေါငျးရငျးကို ကြောမီကာ ယှဉျထိုငျနကွေရငျး တီဗီပျေါမှ ထငျဟပျပွသနသေညျ့ လှုပျရှားမှုမြားကို ကွညျ့နကွေသညျ..။
ပွကှငျးပျေါတှငျမူ မျောတျောကားကွီးတဈစီး စားသောကျဆိုငျ တဈဆိုငျရှတှေ့ငျ ရပျပွီး ကားမောငျးသမားသညျ ကားပျေါမှ ဆငျးလကျြ ဆိုငျထဲ ဝငျသှားသညျ..။ ထို့နောကျ ပွကှငျးပွောငျးကာ ဆိုငျအတှငျးဘကျ မွငျကှငျးပျေါလာသညျ..။ ကောငျတာတှငျ ထိုငျနသေညျ့ အမြိုးသမီးကို အဓိကထား၍ ရိုကျပွထားသညျ..။ အမြိုးသမီးသညျ အသကျ ၂၀ ခနျ့ သာ ရှိသေးသညျ.. ရှရေောငျဆံပငျနှငျ့ ခြောမောလှပသညျ့ ဗိုလျမလေး ဖွဈသညျ..။ ထိုငျခုံတှငျ ခပျဟော့ဟော့လေး ထိုငျနရောမှ လုံးကဈြထှားအိသော တငျသားဆိုငျမြားနှငျ့ တငျးရငျး ရှညျလြားသှယျပွောငျးသညျ့ ပေါငျလုံးပေါငျတနျမြားသညျ တငျးကွပျစှာ ဝတျထားသော အသားကပျ ဂငျြးဘောငျးဘီရှညျ အောကျတှငျ ထငျရှားစှာ ပျေါလှငျနသေညျ..။
တီရှပျ ခပျပါးပါး လေးကလညျး မို့ဝနျးခြှနျကော့နသေညျ့ ရငျသားဆိုငျမြားကို ပျေါလှငျနစေသေညျ..။ ကားမောငျးသမားသညျ တံခါးကိုဖှငျ့ကာ ဆိုငျထဲ လြှောကျလှမျး ဝငျရောကျလာပွီး ကောငျမလေး ရှမှေ့ ထိုငျခုံတှငျ ဝငျထိုငျသညျ..။ “ ဆိုငျ မသိမျးသေးဘူးလား…ဂြိနျး….” ဟု ကားမောငျးသမားက မေးသညျ..။ အင်ျဂလိပျလိုပွောခွငျး ဖွဈသျောလညျး ပညာတတျမြား ဖွဈသညျမို့ ကောငျးစှာပငျ နားလညျကွသညျ..။ “ သိမျးကာနီးပါပွီ…..မိုကျကယျ…၊ မငျးရောကျလာပွီ ဆိုတော့ အခုပဲ သိမျးလိုကျတော့မယျ…၊ ဒါမှ တို့အတှကျ အခြိနျပိုရမှာ…” ဂြိနျးအဖွဈ သရုပျဆောငျသူ ဗိုလျမလေးက ခပျပွုံးပွုံးလေး ပွနျပွောသညျ..။ ဤမြှလောကျ ကွညျ့ရလငျြ မကွာခငျ ဗိုလျမလေးကို မိုကျကယျဆိုသူက လိုးတော့မှာ အေးအေးဝငျး သိလိုကျသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ ကောငျမလေးကို လိုးပွတော့မညျ့ အမြိုးသား သရုပျဆောငျကို သသေခြောခြာ ကွညျ့သညျ..။
မိုကျကယျအဖွဈ သရုပျဆောငျသူသညျ အသကျ ၃၀ ခနျ့ ရှိပွီး အသားမညျးမညျး ကပ်ပလီကပွား တဈယောကျဖွဈသညျ..။ အဝေးပွေး ကားမောငျးသမား ရုပျပီသသညျ..။ မုတျဆိတျမှေး နှုတျခမျးမှေး သဲ့သဲ့ ရှိသညျ..။ မကျြနှာလေးထောငျ့ကကြနြှငျ့ ရုပျရညျ ကွမျးတမျးသညျ..။ ရုပျရညျ ကွမျးကွမျးနှငျ့ အသားမညျးမညျး လူကွမျးကွီးတဈယောကျက ဖွူဖွူနုနု ခြောမောလှပသညျ့ ဗိုလျမလေးကို လိုးတော့မှာမို့ တှေးရငျး ကောငျမလေးအား သနားမိသလိုလို အေးအေးဝငျး ခံစားရသညျ..။
ပွကှငျး ပွောငျးသှားသညျ..။ အပွာကားမြား၏ ထုံးစံအတိုငျး အပိုတှေ သိပျမပွပါ..။ ပွောငျးသှားသညျ့ ပွကှငျးမှာ လူရှငျးပွီး မီးမှောငျနသေညျ့ဆိုငျအတှငျး ပွကှငျးကို ခဏ ပွပွီးနောကျ အိပျခနျးတဈခုကို ပွောငျးသှားသညျ..။ အိပျခနျးထဲသို့ ကောငျမလေးက ရှဆေ့ောငျဝငျကာ ကပ်ပလီကွီးက နောကျမှ လိုကျလာသညျ..။ ကောငျမလေး၏ တသိမျ့သိမျ့ လှုပျသှားသော တငျသားမြားကို အသားပေးပွသညျ..။ ကောငျမလေးသညျ ခုတငျဘေးတှငျ ခပျကွှကွှလေး ရပျသညျ…။ မိုကျကယျက မိမိလိုးရတော့မညျ့ မိနျးမကို အားရပါးရ ကွညျ့သညျ့သဘောမြိုးဖွငျ့ ကငျမရာသညျ ကောငျမလေး၏ ခေါငျးကနေ ခွဖြေားတိုငျ အနီးကပျ တဖွညျးဖွညျးခငျြး ရှလြေ့ားကာ ရိုကျပွသညျ..။ ထို့နောကျ မိုကျကယျက ဂြိနျး၏ တီရှပျကလေးကို ဆှဲခြှတျပဈလိုကျသညျ..။
အတှငျးခံ ဘရာစီယာပငျ စညျးနှောငျထားခွငျး မရှိသညျ့အတှကျ မို့ဝနျးသော ရငျသားဆိုငျနှဈခုသညျ အထငျးသား ပျေါလာသညျ..။ နောကျ ကောငျမလေး၏ ဘောငျးဘီကို ဆကျခြှတျသညျ..။ ထိုအခြိနျတှငျ ခငျမောငျကြျောကလညျး ဇနီးခြော ကလေး၏ ကိုယျပျေါမှ အဝတျတှကေို တဈခုပွီး တဈခု ခပျသှကျသှကျပငျ ခြှတျပဈနသေညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ ပွကှငျးပျေါရှိ စုံတှဲ၏ အဝတျခြှတျပေးနပေုံမြားကို ကွညျ့ရငျး ခငျမောငျကြျောပွုသမြှကို မသိကြိုးကြှနျ ပွုပွီး ငွိမျခံနသေညျ..။ အေးအေးဝငျး ဝတျထားသော အပျေါအကငြ်္ီ ကြှတျသှားသညျ..။ နောကျတော့ အတှငျးခံ ဘရာစီယာ၏ ခြိတျကို ခငျမောငျကြျောက ဆကျဖွုတျသညျ..။ ဘရာစီယာသညျ ထဈခနဲ တဈခကျြဖွဈပွီး ခြိတျပွုတျကာ ကြှတျကှာကသြှားသညျ..။ အေးအေးဝငျး၏ ရငျသားဆိုငျမြားသညျ ဖွူနုကာ လုံးဝနျးနသေညျ..။ ခငျမောငျကြျောသညျ ဇနီးခြောလေးကို အလှနျခဈြသညျ့အတှကျ ရငျသားမြားကို ဘယျတော့မှ ကွမျးကွမျးရမျးရမျး မကိုငျ…။
ခပျဖွညျးဖွညျးသာသာလေး အုပျကိုငျ ပှတျသပျသညျ..။ ထို့ကွောငျ့ အိမျထောငျသကျ ၂ နှဈကြျောကွာခဲ့ပွီ ဖွဈသညျ့တိုငျ အေးအေးဝငျး၏ ရငျသားဆိုငျမြားသညျ အပြိုစငျဘဝကနှငျ့ ဘာမြှ မခွားပဲ လုံးလုံးဝနျးဝနျး ဆူဆူဖွိုးဖွိုးလေးနှငျ့ လှပနဆေဲ..။ တငျးရငျးနဆေဲ ပဲ ဖွဈသညျ..။ ခငျမောငျကြျောသညျ အေးအေးဝငျး၏ ထမီကို ဆကျခြှတျသညျ..။ နောကျတော့ အတှငျးခံ ပငျတီလေးကိုပါ ခနျြမထားတော့..။ ပွကှငျးပျေါရှိ ဗိုလျမလေး ကိုယျလုံးတီးဖွဈသှားခြိနျတှငျ အပွငျဘကျရှိ အေးအေးဝငျးသညျလညျး ဗလာကငျြးသှားလပွေီ..။ ကပ်ပလီကွီးက သူ့ကိုယျပျေါမှ အဝတျတှကေို ဆကျခြှတျသညျ..။ ထိုသို့ ကပ်ပလီကွီး အဝတျတှေ ခြှတျနပေုံကို အေးအေးဝငျးက စူးစိုကျကွညျ့နသေညျ..။ ထိုအခြိနျတှငျ ခငျမောငျကြျောကလညျး သူ့ကိုယျပျေါမှ အဝတျတှကေို သှကျလကျမွနျဆနျစှာပငျ ခြှတျခှာခလြိုကျသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ ခငျမောငျကြျော အဝတျခြှတျနသေညျ့ဖကျသို့ လှညျ့မကွညျ့နိုငျ..။
ကပ်ပလီကွီး အဝတျခြှတျနသေညျ့ မွငျကှငျးကိုသာ စိတျဝငျစားစှာ ကွညျ့နမေိသညျ..။ အေးအေးဝငျး ယခငျကွညျ့ဖူးခဲ့သညျ့ အပွာကားမြားတှငျ အမြိုးသားသရုပျဆောငျမြားသညျ လူဖွူဘိုမြားသာ ဖွဈရာ မွငျခဲ့ရသညျ့ လီးတှကေလညျး အဖွူတှခေညျြးသာ ဖွဈသညျ..။ သူ့လငျ ခငျမောငျကြျောမှာလညျး တရုတျကပွားဖွဈ၍ လီးကလညျး ဖွူသညျ..။ ကပ်ပလီကွီး၏ လီးမညျးမညျးကွီးသညျ အေးအေးဝငျးအဖို့ အဆနျးမို့ စိတျဝငျစားစှာ စောငျ့ကွညျ့နခွေငျး ဖွဈသညျ..။ နောကျဆုံး ကနျြနသေော အောကျခံဘောငျးဘီကို ခြှတျခလြိုကျ၍ တနျးခနဲ ပျေါလာသညျ့ ကပ်ပလီကွီး၏ လီးကို မွငျရသောအခါ အေးအေးဝငျး၏ ရငျထဲတှငျ ဒိနျးခနဲပငျ ခုနျသှားရသညျ..။ မညျးနကျနသေညျ့ လီးကွီး၏ အရောငျအသှေးကပငျ အသညျးယားစရာ…။ ပွီးတော့ လီးကွီးက ကွီးမားထှားကွိုငျးလှနျးလှသညျ..။
အေးအေးဝငျး စိတျထငျ ထိုလီးကွီးသညျ မရှိဘူးဆို ဆယျလကျမလောကျတော့ ရှညျမညျ..။ လုံးပတျကလညျး ကိုကာကိုလာ သံဗူးလောကျကို တုတျသညျ..။ မာနျထကာ တောငျမတျနခြေိနျမို့ ဒုံးပြံကွီးတဈခုလို တနျးနလေကျြ လီးတနျလုံးပတျတလြှောကျတှငျ အကွောတှေ ပွိုငျးပွိုငျးထနသေညျမှာ မြှော့ကွီးမြား ရဈပတျနသေလားဟု ထငျရသညျ..။ အေးအေးဝငျး အလိုးခံဖူးသော ခငျမောငျကြျော၏ လီးမှာ ရှဈလကျမခနျ့ ရှညျလြားပွီး ကပျြလုံးလောကျ တုတျသညျ..။ ထို့ပွငျ အပွာကားမြားထဲတှငျ မွငျဖူးသမြှဆိုပါက အကွီးဆုံးလီးသညျ ကိုးလကျမကျနီးပါးခနျ့သာ ရှညျသညျ..။ ယခုမွငျရသညျ့ လီးမညျးကွီးကတော့ အေးအေးဝငျးမွငျဖူးသမြှတှငျ အကွီးဆုံး အတုတျဆုံး ဖွဈသညျ..။ ထိုလီးတနျမညျးမညျးကွီးသညျ အေးအေးဝငျးကို ညှို့ယူဖမျးစားလိုကျသညျ..။ သညျလို ကွီးမားတုတျခိုငျသော လီးတနျ မညျးမညျးကွီးနှငျ့ အလိုးခံကွညျ့ခငျြသညျ့ စိတျမြားလညျး တဖှားဖှား ပျေါလာသညျ..။
သို့သျော ကပ်ပလီကွီးသညျ တီဗီထဲက ထှကျလာကာ အေးအေးဝငျးကို လိုးမညျမဟုတျ..။ သူနှငျ့တှဲဖကျ ဗိုလျမလေးကိုသာ ကောငျးကောငျးလိုးပွမညျ..။ ထို့ကွောငျ့ အေးအေးဝငျးသညျ သူမကို လကျတှလေို့းပေးနိုငျသညျ့ လငျတျောမောငျ၏ လီးဖွူဖွူကိုသာ လကျဖွငျ့ လှမျးဆုတျကိုငျလိုကျရသညျ..။ ဆိုးတော့ မဆိုးပါ..။ ပွကှငျးပျေါရှိ လီးမညျးမညျး ထှားထှားကွီးကို သသေခြောခြာကွညျ့ရငျး ခငျမောငျကြျော၏ လီးကို ဆုပျကိုငျထားရာ အေးအေးဝငျး၏ စိတျထဲတှငျ လီးမညျးကွီးကို ကိုငျထားရသလိုမြိုးတော့ ခံစားရသညျ..။ “ ကိုယျ့လီး ကိုစုတျပေးလကှေယျ….” ကပ်ပလီကွီးက ဗိုလျမလေးကို လှမျးပွောသညျ..။ “ ဟှနျး…သူကတော့ ဒါပဲ…” ကောငျမလေးက ပွုံးပွုံးလေး ပွောကာ ၊ ကပ်ပလီကွီး၏ ခွရေငျးတှငျ ဒူးတုပျထိုငျခလြိုကျသညျ..။ ကငျမရာ၏ ရိုကျကှငျးက ပွောငျးသှားသညျ..။
ကွီးမားတုတျခိုငျလှသော လီးတနျမညျးမညျးကွီးကို အနီးကပျ ရိုကျပွသညျ..။ ပွကှငျးတဈခုလုံးတှငျ လီးမညျးမညျးတုတျတုတျကွီးဖွငျ့ ပွညျ့နသေညျ..။ လီးကွီးကို အသေးစိတျ သသေခြောခြာ မွငျရပရော အေးအေးဝငျးမှာ စိတျအထူးလှုပျရှားလာလကျြ ဆုပျကိုငျထားသော ခငျမောငျကြျော၏ လီးဖွူဖွူကို ဂှငျးတိုကျပေးမိသညျ..။ နောကျတော့ ကငျမရာက နောကျဆုတျလိုကျရာ လီးမညျးမညျးကွီး၏ အနားတှငျ မော့မော့လေး ပွုထားသော ကောငျမလေး၏ မကျြနှာ ပျေါလာသညျ..။ ကောငျမလေး၏ သေးသှယျပြော့ပြောငျးသော လကျကလေးတဈဖကျကို ဆနျ့ထုတျကာ လီးမညျးမညျးကွီးကို ဆုပျကိုငျသညျ..။ လီးကွီးက ကွီးမားမညျးနကျလကျြ သှယျပွောငျးသညျ့ လကျခြောငျးဖွူဖွူလေးမြားနှငျ့ ဆုတျကိုငျလိုကျပုံမွငျကှငျးသညျ တကယျပငျ အသညျးယားစရာ..ကောငျးလှသညျ..။
ခငျမောငျကြျော၏ လကျမြားက အေးအေးဝငျး၏ ရငျသားဆိုငျမြားကို ခပျရှရှလေး ပှတျသပျလာသညျ..။ ထို့နောကျ ကောငျမလေးသညျ ပါးစပျလေးကို အစှမျးကုနျ ဟကာ လီးထိပျဖြားကို ငုံလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ အသာရှသေို့တိုးလိုကျရာ ငုံမိထားသော လီးကွီးသညျ ကောငျမလေး၏ ပါးစပျထဲ တိုးဝငျသှားသညျ..။ အဆုံးထိတော့ မဝငျ..။ တဈဝကျမရှိတရှိသာ ဝငျ၏..။ ကောငျမလေးသညျ ပါးလေးမြား ပိနျလိုကျဖောငျးလိုကျ ဖွဈအောငျ စုပျပေးရာ လီးစုတျသံ တပွှတျပွှတျကို ပငျ အေးအေးဝငျး အတိုငျးသား ကွားရသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ ထိုလီးမညျးမညျးကွီးကို စုတျခငျြစိတျတှေ ဟုနျးခနဲ ထလာသညျ..။ ထို့ကွောငျ့ ခငျမောငျကြျော၏ လီးကိုပငျ လီးမညျးကွီးဟု သဘောထားကာ ကုနျး၍ စုပျပေးလိုကျမိတော့သညျ..။ “ ဟား…အူး..ဟား…ဟား…” အထူးအထှေ မတိုကျတှနျးရပါပဲ အေးအေးဝငျးက လီးကို စုပျပေးလာ၍ ခငျမောငျကြျော အကနြေပျကွီး ကနြေပျကာ ပါးစပျမှ အသံတှပေငျ ထှကျသှားသညျ..။
ထိုအခြိနျတှငျ ပွကှငျးထဲရှိ ကပ်ပလီကွီးကလညျး ကောငျမလေး၏ လီးစုပျပေးမှုကို ကနြေပျစှာအံကွိတျ ရရှေတျလိုကျသညျနှငျ့ အံကိုကျ တိုကျဆိုငျသှားရာ အေးအေးဝငျး၏ စိတျထဲတှငျ ထိုလူကွီး၏ လီးမညျးမညျးကွီးကို မိမိပါးစပျဖွငျ့ စုတျပေး၍ ထိုလူကွီး ကနြေပျသဘောကသြှားသညျ့အလား ခံစားရကာ ပွကှငျးပျေါရှိ ကောငျမလေးနှငျ့ အပွိုငျပငျ ခငျမောငျကြျော၏ ငပဲကွီးကို သဲသဲမဲမဲပငျ အားရပါးရ စုပျပေးနသေညျ..။ ကောငျမလေးသညျ လီးခြောငျးကွီးကို စုတျပေးရာမှ ပါးစပျကိုခှာကာ ဂှေးဥမညျးမညျးကွီးမြားကို ကုနျး၍ စုပျပေးပွနျသညျ..။ အေးအေးဝငျး၏ စိတျထဲတှငျ ဂှေးဥကို စုတျပေးလိုစိတျတှေ တဖှားဖှား ပျေါလာသညျ..။ အကယျ၍ ထိုအခြိနျတှငျ ခငျမောငျကြျောကသာ အေးအေးဝငျး၏ ခေါငျးကို အောကျသို့ဆှဲခပြွီး ဂှေးဥကို ယကျခိုငျးစုပျခိုငျးပါက အေးအေးဝငျးအနဖွေငျ့ မငွငျးတမျးပငျ ပွုလုပျပေးမှာ သခြောသညျ..။ သို့သျော လီးစုတျပေးတာကိုပငျ အတျောဟုတျပွီ ထငျနသေော ခငျမောငျကြျောသညျ ရှသေို့ သိပျအတငျ့မရဲဝံ့သေး..။
ခငျမောငျကြျောက လမျးပွ တောငျးဆိုခွငျး မပွုသညျ့အတှကျ အေးအေးဝငျးမှာ ဂှေးဥမြားကို စုတျကွညျ့ခငျြစိတျတှေ ဖွဈပျေါနသေျောလညျး သူမကိုယျတိုငျ စတငျ၍ မပွုလုပျရဲပေ..။ ထို့ကွောငျ့ လီးကိုသာ ပို၍မဲကာ စုတျပေးနရော ခငျမောငျကြျောမှာ ရငျထဲ ဖိုအေးကာ တဈကိုယျလုံး ကွကျသီးတှထေလကျြ အလှနျပငျ ဇိမျတှနေ့လေသေညျ..။ ပွကှငျးက ပွောငျးသှားပွနျသညျ..။ လီးစုတျ ဂှေးဥယကျပေးနပေုံကို အဝေးမှ ရိုကျပွသညျ..။ ကပ်ပလီကွီးက ကောငျမလေး၏ ခေါငျးကို အသာဆှဲကာ ကောငျမလေး ပါးစပျမှ သူ့လီးကွီးကို ဆှဲထုတျလိုကျသညျ..။ “ ခုတငျပျေါ တကျကွစို့ …” ကပ်ပလီကွီးက ပွောသညျ..။ ကောငျမလေးသညျ မဆိုငျးမတှပငျ ခုတငျပျေါ တကျကာ ပကျလကျလှနျအိပျလိုကျသညျ..။ ခုတငျပျေါတှငျ ပကျလကျလှနျအိပျနသေညျ့ ကောငျမလေးကို အနီးကပျ ရိုကျပွထားသညျ..။
ကောငျမလေးက ပေါငျလုံးကွီးနှဈလုံးကို အဆငျသငျ့ပငျ ကား၍ ပေးထားရာ စောကျဖုတျကွီး ပွဲအာလကျြ စပျယှကျရာ စောကျခေါငျးပေါကျကလေးက ထငျရှားစှာ ပျေါနသေညျ..။ ကပ်ပလီကွီးက ကားထားသော ပေါငျလုံးကွီးနှဈခုအကွားတှငျ ဝငျကာ နရောယူသညျ..။ ကငျမရာက ရှသေို့ တိုးလာသညျ..။ လီးတနျမညျးမညျးနကျနကျကွီး ဖွူနုနသေညျ့ စောကျဖုတျဝတှငျ တထေ့ောကျလိုကျပုံကို အနီးကပျ ရိုကျပွသညျ..။ ထို့နောကျ ကငျမရာက နောကျသို့ပွနျအဆုတျတှငျ ကပ်ပလီကွီးက ခါးကော့လကျြ လီးကို ဆောငျ့သှငျးလိုကျသညျ..။ လီးတနျမညျးမညျးတုတျတုတျကွီး စောကျဖုတျလေးထဲ သို့ ခြိုငျ့ဝငျအောငျ နဈမွုတျသှားသညျကို အသညျးယားဖှယျရာ မွငျနရေသညျ..။ အေးအေးဝငျး မနနေိုငျတော့..။ အလိုးခံခငျြစိတျမြားက ထိနျးမနိုငျတော့အောငျ ဖွဈလာသညျ..။ ထို့ကွောငျ့ လီးစုတျပေးနရောက အသာခှာပွီး ခုတငျပျေါတှငျ ပကျလကျအိပျလိုကျသညျ..။
ခငျမောငျကြျောကလညျး အထာပေါကျကာ အေးအေးဝငျး၏ ကိုယျပျေါတကျခှလကျြ ပေါငျကွီးကို ဖွဲထားလိုကျသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ မကျြစိကို မှိတျထားသညျ..။ ခငျမောငျကြျော၏ လီးက အေးအေးဝငျး၏ စောကျဖုတျထဲသို့ လြှောခနဲ တိုးဝငျလာသညျ..။ ထို့နောကျ ခငျမောငျကြျောသညျ သှကျသှကျလေးပငျ ဆောငျ့လိုးသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ ခငျမောငျကြျော ဆောငျ့လိုးနတောကို ခံရငျး အသာမကျြစိကို ခပျမှေးမှေး ဖှငျ့ကာ တီဗီပွကှငျးကို လှမျးကွညျ့သညျ..။ အေးအေးဝငျးအိပျနသေညျ့ နရောမှဆိုလငျြ မွငျကှငျးကို ကောငျးကောငျးမွငျရသညျ..။ ကပ်ပလီကွီးသညျ ကောငျမလေး၏ ကိုယျပျေါတှငျ တလှုပျလှုပျဖွငျ့ တအားလိုးနသေညျ..။ ကောငျမလေးသညျ အောကျမှနေ၍ ဖငျကွီးကို ကော့ကာပငျ့ကာ လှုပျရှားပေးသညျ..။ တုတျဖွိုးသော ပေါငျတနျကွီးမြားကိုလညျး မွှောကျကှေးကာ ပေးသညျ..။ ထို့ပွငျ တအားလိုးနတေဲ့ ကပ်ပလီကွီး၏ ကြောပွငျကိုလညျး လကျဖွူဖွူနုနုလေးမြားဖွငျ့ သိုငျးဖကျရငျး ပှတျပေးနသေညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျလညျး ပွကှငျးပျေါရှိ ကောငျမလေး လုပျသလို လိုကျလုပျမိသညျ..။
သူမ၏ စိတျထဲတှငျ သူမ စောကျဖုတျထဲသို့ ထိုးဝငျပွနျထှကျနှငျ့ လိုးနသေညျမှာ ခငျမောငျကြျော၏ လီးဖွူဖွူ မဟုတျပဲ ကပ်ပလီကွီး၏ ဆယျလကျမကြျော ရှညျလြားသညျ့ လီးမညျးမညျးတုတျတုတျကွီး ဖွဈသညျဟု တှေးထငျ ခံစားနသေညျ..။ ကပ်ပလီကွီး၏ ဆောငျ့ခကျြမြားသညျ အလှနျမွနျ အလှနျကွမျးလှရာ စကျသနေပျပဈနသေလားပငျ ထငျရသညျ..။ အေးအေးဝငျးအဖို့ တဈနှဈသုံးလေး လိုကျလံရတှေကျသညျမှာပငျ မမှီနိုငျတော့..။ အောကျမှ အလိုးခံနသေော ကောငျမလေးသညျ မကျြတောငျလေး မှေးစငျးကာ နှုတျခမျးလှာ နီနီလေးကို ခပျစူစူပွုလကျြ လိုးနသေူကို တဈစုံတဈရာ ပွောလိုကျသညျ..။ ခငျမောငျကြျော၏ ဆောငျ့လိုးနသေံမြားကွောငျ့ အေးအေးဝငျး မှာ ကောငျမလေး ဘာပွောလိုကျသညျကို မကွားမိတော့ပေ..။ ကောငျမလေး ပွောလိုကျသညျမှာ … “ ငါလေးဖကျကုနျးပေးမယျ…၊ ဖငျထဲကိုထညျ့ပွီး ဖငျလိုးပေးနျော….” ဟူသတညျး…..။
ထိုစကားကိုသာ ကွားမိပါက အေးအေးဝငျး၏ စိတျအစဉျ တဈမြိုး လှုပျရှားမိမညျမှာ မလှဲပေ..။ ကပ်ပလီကွီးက ခေါငျးငွိမျ့ပွပွီး အဆောငျ့ရပျကာ ကောငျမလေး၏ စောကျဖုတျထဲမှ လီးတနျကွီးကို ဆှဲဖွုတျလိုကျသညျ..။ ကောငျမလေးသညျ ခကျြခငျြးပငျ လှဲအိပျနရောမှ ထကာ ဒူးတုတျ၍ ဖငျပူးတောငျး ထောငျကာ ကုနျးပေးသညျကို အေးအေးဝငျး မွငျနရေသညျ..။ ကပ်ပလီကွီးသညျ ကုနျးပေးထားသော ကောငျမလေး၏ ဖငျကွီးနောကျတှငျ ဒူးထောကျနရောယူကာ ဖငျသားနှဈခွမျးကို ဆှဲဖွဲလကျြ စအိုဝတှငျ သူ့လီးမညျးမညျးကွီးကို တလေို့ကျရာ ကွညျ့နသေူ အေးအေးဝငျးမှာ ရငျထဲ ဒိနျးခနဲ လှုပျရှားလကျြ ခပျမှေးမှေး ဖွဈနသေော မကျြလုံးမြားပငျ ပွူးကယျြဝိုငျးစကျသှားသညျ..။ အေးအေးဝငျး၏ ကိုယျပျေါ တကျခှကာ လိုးနသေူ ခငျမောငျကြျောမှာမူ ကြောပေးထားသဖွငျ့ ထိုမွငျကှငျးကို မမွငျရ..။ ဖငျပွောငျကွီး နိမျ့လိုကျကွှလိုကျဖွငျ့သာ အားရပါးရ ဆောငျ့လိုး၍ နသေညျ..။ “ ကလငျ….ကလငျ….ကလငျ….” တယျလီဖုနျး ခေါငျးလောငျးသံက ရုတျတရကျ မွညျလာသညျ..။
ခငျမောငျကြျောမှာ အတျောပငျ ထိတျလနျ့သှားမိသညျ..။ ထိုတယျလီဖုနျးသညျ သာမနျ ရိုးရိုး တယျလီဖုနျး မဟုတျ..။ ခငျမောငျကြျော၏ လူယုံတျော မနျနဂြော ကိုတိတျကွညျနှငျ့ တိုကျရိုကျဆကျသှယျထားသညျ့ အထူးသီးသနျ့ ရဒေီယို တယျလီဖုနျး ဖွဈသညျ..။ အလှနျအရေးကွီးသညျ့ ကိစ်စမြား ပျေါပေါကျဖွဈပှားမှသာလငျြ ဆကျသှယျအသုံးပွုရသညျ..။ ယခုလို အရေးပျေါ တယျလီဖုနျး အသံမွညျလာသညျ့အတှကျ ကောကျယူနားထောငျ မကွညျ့မီကပငျ ၊ မိမိ၏ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ အထူးအရေးကွီးသညျ့ ကိစ်စတဈခုခု ပျေါပေါကျပွီ ဆိုခွငျးကို ခငျမောငျကြျော နားလညျလိုကျသညျ..။ ဇနီးခြောလေးကို တကျလိုး၍ ကောငျးနတေုနျး ဖွဈသျောလညျး စီးပှားရေး လုပျငနျးကို မကျြကှယျပွု၍ မဖွဈသောကွောငျ့ ခငျမောငျကြျောသညျ ထိုအရပေျေါတယျလီဖုနျးကို ကောကျယူနားထောငျလိုကျသညျ..။ လီးကိုကား အဖုတျတှငျ တပျထားဆဲ ဖွဈသညျ..။
ဆောငျ့လိုးနခွေငျးကာ မရှိတော့..။ အလိုးခံ၍ ကောငျးတုနျး အဆောငျ့ရပျသှားသောကွောငျ့ အေးအေးဝငျးမှာ အတျောပငျ မခငျြ့မရဲ နှငျ့ ဒေါသပငျ ဖွဈမိသညျ..။ တယျလီုဖုနျးကို နားထောငျနရေငျး ခငျမောငျကြျော၏ မကျြနှာ ကှကျခနဲ ပကျြသှားသညျ..။ စောကျဖုတျထဲမှ လီးလညျး ခကျြခငျြးပငျ ပြော့ခှကော ကြှတျထှကျသှားသညျ..။ “ ကြိုငျးတုံဖကျက ခလြာတဲ့ ပစ်စညျးတှေ ပွဿနာ တကျနလေို့တဲ့….၊ ဒုက်ခပါပဲ…အေးရယျ…၊ မောငျ လိုကျသှားမှ ဖွဈလိမျ့မယျ….” ခငျမောငျကြျောသညျ တယျလီဖုနျး ပွောပွီးသညျနှငျ့ အမောတကော ရရှေတျကာ အဝတျအစားမြား အမွနျဝတျကာ ငှအေိတျနှငျ့ အရေးပျေါ ခရီးဆောငျအိတျကို ဆှဲလကျြ ကမနျးကတနျးပငျ ပွေးထှကျသှားသညျ..။ ယခုလို မကွာခဏ သှားရတတျ၍ အရေးပျေါ ခရီးဆောငျအိတျကို လိုအပျသညျမြား အသငျ့ထညျ့ကာ ပွငျဆငျထားရမွဲ ဖွဈသညျ..။
ခါတိုငျး အရပေျေါ ခရီးထှကျသညျက မဆနျးသျောလညျး ခုလို အခြိနျအခါမြိုးတှငျ ဗွုနျးစားကွီး ထှကျသှားရတာမြိုးတော့ မရှိခဲ့ဖူးသေးပေ…။ ကြိုငျးတုံမှ ပစ်စညျးမြားသညျ ခငျမောငျကြျော၏ စီးပှားရေး တဟုနျထိုး တိုးတကျလာစနေိုငျသလို ၊ ခြှတျခွုံကသြှားစလေောကျအောငျလညျး ပွုနိုငျသောကွောငျ့ ခငျမောငျကြျော မှာ ဇနီးခြောလေးကို ပွီးအောငျ ဆကျမလိုးနိုငျတော့ပဲ ကိုယျလုံးတီးနှငျ့ အိပျခနျးထဲတှငျ သညျအတိုငျး ထားရဈခဲ့ကာ အပွေးအလှားပငျ ထှကျခှာသှားရပတေော့သညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ မကမြေနပျ ဒေါပှ၍ နသေညျ…။
ဒါပမေယျ့ ဘာကို ဒေါသဖွဈရမှနျးတော့ မသိ..၊ ကြိုငျးတုံမှ ပစ်စညျးတှေ အရေးကွီးမှနျးလညျး သိထားသညျမို့ အပွေးအလှား ထှကျသှားရရှာသညျ့ လငျတျောမောငျကိုလညျး အပွဈ မတငျလိုပါ..။ ကာမအရသာ ဆပျတငံ့ငံ့ ဖွဈသှားရမှုကွောငျ့ မခငျြ့မရဲနှငျ့ မကနြေပျမှုတို့ကို သှနျထုပျကာ တဈယောကျတညျး ငိုရှိုကျနမေိသညျ..။ အားရအောငျ ငိုလိုကျရ၍ စိတျထဲအနညျးငယျ ပေါ့ပါးသှားသညျ..။ တဏှာဇောရမ်မကျကတော့ မပြောကျသေး..။ တငှငှေ့ေ့ လောငျမွိုကျနဆေဲ..။ အေးအေးဝငျး၏ နားထဲတှငျ အသံမြား ကွားနရေသညျ့အတှကျ မော့ကွညျ့လိုကျရာ တီဗီမှာ ပွသနဆေဲ ဖွဈသညျကို မွငျရသညျ..။ အောကျစကျခလုပျကိုလညျး မပိတျမိသေးသောကွောငျ့ အခှကေ ဆကျလကျလညျပတျကာ အပွာကား ပွကှကျမြားသညျ ဆကျလကျပျေါလှငျနဆေဲ ဖွဈသညျ..။ လူသူ ကငျးရှငျးနသေညျ့ လမျးမကွီးတဈခုဘေးနားတှငျ ခပျအေးအေး လြှောကျလှမျးလာနသေော တရုတျမလေးတဈယောကျကို ပွကှငျးထဲတှငျမွငျရသညျ..။
ဇာတျလမျးက ဘယျနရောက ဘယျလိုပွောငျးနသေညျကိုကား အေးအေးဝငျး မသိတော့..။ ကားလမျးပျေါတှငျ ကားနကျတဈစီး အသာမောငျးလာနပေုံ တှရေ့သညျ..။ ကားသညျ တရုတျမလေး၏ ဘေးနားတှငျ ရပျသှားသညျ..။ တရုတျမလေး၏ အလနျ့တကွား ဖွဈသှားသညျ့မကျြနှာကို အနီးကပျ ရိုကျပွသညျ..။ ထို့နောကျ ကားပျေါမှ လူတဈယောကျ ခုနျထှကျလာကာ တရုတျမလေး၏ ခေါငျးကို ရိုကျခလြိုကျရာ တရုတျမလေး ခှကေသြှားသညျ..။ သတိလဈသှားပုံရသညျ..။ ကားပျေါမှ ခုနျထှကျလာသူမှာ စောစောကအပိုငျးတှငျ ဗိုလျမလေးကို လိမျ့နအေောငျ လိုးပွခဲ့သညျ့ ကပ်ပလီကွီးပငျ ဖွဈသညျ..။ ထိုလူကွီးသညျ ယခု တရုတျမလေးကို လိုးပွအုံးမညျကို သိရသညျတှငျ အေးအေးဝငျး ရငျခုနျလာသညျ..။ မကျြလုံးကလညျး ပွကှငျးမှ မခှာနိုငျတော့ ။ စကျကိုပိတျကာ အေးအေးလူလူ အနားယူတော့မညျဟူသော စိတျကူးတှလေညျး ပြောကျကုနျသညျ..။ ဇာတျကားကို ဆကျ၍ ကွညျ့နမေိသညျ..။ သညျအပွာကားကို ကူးထားလိုကျရလငျြ ကောငျးမညျလားဟု တှေးမိကာ ဗီဒီယိုရိုကျသညျ့ ကငျမရာကို လှမျးကွညျ့မိသညျ..။
ထိုကငျမရာဝယျထားသညျမှာ မကွာသေး..။ ကငျမရာထဲတှငျ ခှလှေတျအသဈတဈခှကေလညျး အသငျ့ထညျ့ထားပွီး ဖွဈသညျ..။ အောကျစကျက တဈလုံးတညျးသာရှိရာ အကယျ၍ ကူးယူလိုပါက ပွကှငျးပျေါတှငျ ထငျနသေညျမြားကို ဗီဒီယိုကငျမရာဖွငျ့ ပွနျရိုကျယူရမညျ ဖွဈသညျ..။ အခြိနျကလညျး အမြားကွီးရှိသေးသညျ့အတှကျ ဇာတျကားကို အရငျပွီးအောငျ ကွညျ့မညျဟု ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ..။ ပွီးမှသာ အေးအေးဆေးဆေး ပွနျလညျ၍ ကွိုကျသညျ့အကှကျမြားကို ရိုကျကူးယူထားတော့မညျ..။ အေးအေးဝငျး တီဗီကို ပွနျကွညျ့သညျ..။ ကပ်ပလီကွီးက သတိလဈနသေော တရုတျမလေးကို ပုခုံးထကျတှငျ ထမျးတငျကာ ကားပျေါပဈတငျပွီး ကားမောငျးထှကျသှားသညျကို ပွသကာ ပွကှငျးပွောငျးသှားသညျ..။ ပွနျပျေါလာသညျ့ ပွကှငျးသညျ အိပျခနျးတဈခု ဖွဈသညျ..။ တဈယောကျအိပျခုတငျ တဈခု အခနျးထဲတှငျ ရှိနသေညျ..။
ကပ်ပလီကွီးသညျ တရုတျမလေးကို ထမျးကာ အခနျးထဲ ဝငျလာပွီး ခုတငျပျေါတငျလိုကျသညျ..။ တရုတျမလေးသညျ သတိရနပွေီ ဖွဈသညျ..။ ခုတငျပျေါတှငျ ထထိုငျကာ ကပ်ပလီကွီးကို အလနျ့တကွားကွညျ့နသေညျ.။ “ ဘယျလိုလဲ..နငျအခု ငါလိုးတာ ခံရတော့မယျ…မဟုတျလား..၊ အေးအေးဆေးဆေး အလိုးခံရငျ နငျသကျသာမယျ..” ကပ်ပလီးကွီးက တရုတျမလေးကို ကွညျ့ပွီးပွောသညျ..။ တရုတျမလေးခမြာ စကားပွနျမဆိုနိုငျရှာပါ..။ ကွောကျလှနျးသညျ့အမူအယာဖွငျ့ ခေါငျးတဈခါခါ လုပျပွနရှောသညျ..။ ကငျမရာက ကပ်ပလီကွီးကို အနီးကပျ ရိုကျပွနသေညျ.။ “ ကဲ….အဝတျတှေ ခြှတျလိုကျစမျး…” ကပ်ပလီကွီးက မာနျပါပါ ပွောသညျ..။ တရုတျမလေး၏ အနီးကပျ ရိုကျခကျြပျေါလာသညျ..။ “ ဟငျ့အငျး….ဟငျ့အငျး….” ကောငျမလေးက ငိုမဲ့မဲ့ အမူအရာလေးဖွငျ့ ပွောသညျ..။ အသံကလညျး တုနျရငျနသေညျ..။ အတျောကို သရုပျဆောငျ ပီပွငျသညျ..။ နောကျပွကှငျးက တရုတျမလေး၏ အဝတျမြားကို ကပ်ပလီကွီးက ဆုတျဖွဲ ဆှဲခြှတျပုံဖွဈသညျ..။ ပထမဆုံး တရုတျမလေး ဝတျထားသညျ့ ဘလောကျဈ အကငြ်္ီကို ဆှဲဖွဲပဈသညျ.။ နောကျတော့ ဘရာစီယာလေးကိုပါ ဆောငျ့ဆှဲခြှတျသညျ..။
ကောငျမလေး၏ အထကျပိုငျး ဗလာကငျြးသှားကာ ဖွူနုထှားမို့သညျ့ ရငျသားလုံးလုံးဝနျးဝနျးမြားက တုနျခါလကျြ ပျေါလာသညျ..။ ထိုရငျသားမြားကို အနီးကပျ ရိုကျပွရာ ဖွူနုနသေော ရငျသားမို့မို့မြားတှငျ အကွောစိမျလေးမြား ယှကျသနျးနပေုံနှငျ့ လကျသနျးဖြားခနျ့ရှိမညျ့ နို့သီးခြှနျခြှနျလေးမြား ကော့စူထောငျတကျနသေညျကို အထငျအရှားမွငျရသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ အလိုလိုပငျ သူမ၏ နို့သီးမြားကို ကိုငျကွညျ့မိသညျ..။ သူမ၏ နို့သီးမြားမှာလညျး တရုတျမလေး၏ နို့သီးလေးမြားလိုပငျ လကျသနျးဖြားလောကျ ရှညျကာ ခြှနျကော့ ထောငျတကျနသေညျ..။ ကပ်ပလီကွီးသညျ ကုနျး၍ တရုတျမလေး၏ နို့သီးကို ပါးစပျဖွငျ့ စုပျသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ ယောကျယမျးကာ မိမိ၏ နို့သီးမြားကို လကျညှိုးလကျမတို့ဖွငျ့ ဖဈြညှဈကွညျ့မိသညျ..။ မိမိ၏ နို့သီးမြားကို ကပ်ပလီကွီးက စုတျပေးနသေလားဟုပငျ ထငျမိသညျ..။
ပွကှငျးပျေါတှငျတော့ ကပ်ပလီကွီးက တရုတျမလေး၏ နို့တှကေို အားရပါးရပငျ တအားစုတျနမျးနသေညျ..။ နို့သီးမြား သာမက နို့အုံကွီးတဝကျခနျ့ပငျ ကပ်ပလီကွီး၏ ပါးစပျထဲ ရောကျနသေညျ..။ ဒါကိုကွညျ့ရငျး အေးအေးဝငျးသညျ သူမ၏ ရငျသားမြားကို အလိုလို ကော့ပေးမိသညျ..။ တရုတျမလေးသညျ အကွောကျအကနျ ငွငျးဆနျနသေညျ..။ လကျသီးဆုပျမြားဖွငျ့ ကပ်ပလီကွီးကို ထုသညျ ရိုကျသညျ..။ အတငျးတှနျးပဈသညျ..။ ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုမှ တှနျးဖယျပဈ၍ မရပါ..။ ကပ်ပလီကွီးက နို့သီး ဖွူနုနုလေးမြားကို အားရပါးရပငျ စုတျနမျးနလေသေညျ..။
ထို့နောကျ ကပ်ပလီကွီးက တရုတျမလေး၏ စကပျတိုနံ့နံ့လေးကို အတငျးဆှဲခြှတျပဈလိုကျရာ ဖွူဖှေးဖှေး ဖငျသားကွီးမြားသညျ မလုံ့တလုံ အတှငျးခံပငျတီ ဘောငျးဘီတိုလေး၏ အကာအကှယျကွားမှ တဈထှကျ၍ ပျေါလာကွသညျ..။ ကပ်ပလီကွီးက တရုတျမလေးကို ခုတငျပျေါတှနျးလှဲခလြိုကျသညျ..။ ခုတငျပျေါ ပကျလကျလနျလဲကသြှားသညျ့ တရုတျမလေးကို အနီးကပျရိုကျပွသညျ..။ တရုတျမလေးသညျ ပေါငျလေးကားလကျြ လဲကနြရော အတှငျးခံ ဘောငျးဘီခှဆုံတှငျ မို့မို့လေး ဖောငျးအိနပေုံနှငျ့ ရငျသားအစုံ အိအိလေး တုနျခါနသေညျတို့ကို အထငျးသာ မွငျနရေသညျ..။
တရုတျမလေး၏ မကျြနှာတှငျလညျး ထိတျလနျ့ကွောကျရှံ့နသေညျ့ ဟနျက အထငျအရှား ပျေါလှငျနသေညျ..။ ကပ်ပလီကွီးသညျ ခုတငျထကျသို့ တကျလာကာ တရုတျမလေး၏ ပငျတီလေးကို အတငျးဆှဲခြှတျပဈသညျ..။ တရုတျမလေးက အတငျးရုနျးကနျပွီး နှဈယောကျသာ ထှေးလားလုံးလား ဖွဈနပေုံကို အတျောကွာကွာ ရိုကျပွထားသညျ..။ တရုတျမလေး၏ ပငျတီ ကြှတျတော့မလို မကြှတျတော့မလို ဖွဈနပေုံမှာ ကွညျ့နရေသူ အေးအေးဝငျး၏ စိတျကို ကလြိကလြိ ဖွဈစသေညျ..။ ဒါပမေယျ့ နောကျဆုံးတော့ ကောငျမလေး၏ ကိုယျပျေါမှ ဘောငျးဘီလေး ကြှတျကှာကကြာ လုံးဝ ကိုယျလုံးတီး ဖွဈသှားရလသေညျ..။ ကပ်ပလီကွီးလညျး ကိုယျလုံးတီးဖွဈနသေော ကောငျမလေးကို မကျြလုံးမြားအရောငျတလကျလကျထကာ ကွညျ့နသေညျ..။ ကပ်ပလီကွီးသညျ အတှငျးခံဘောငျးဘီလေးတော့ ဝတျထားဆဲ ဖွဈသညျ..။
အတှငျးခံဘောငျးဘီအောကျမှ ထိုးထိုတောငျထောငျ ဖွဈနသေညျ့ လီးကွီးမှာ တောငျမတျနပွေီဖွဈကွောငျး အေးအေးဝငျး မွငျရုံနှငျ့ သိသညျ..။ တရုတျမလေးသညျ အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ခြှတျခလြိုကျသော ကပ်ပလီကွီးကို ကွောကျလနျ့စှာနဲ့ ကွညျ့နရှောသညျ..။ မညျးနကျကာ တောငျမတျနသေော လီးကွီးက အမွောကျကွီးတဈလကျလို မတျမတျကွီး ထောငျလကျြသား ပျေါလာသညျ..။ ထို့နောကျ ကပ်ပလီကွီးက တရုတျမလေးကို အတငျးဖကျသညျ..။ ကောငျမလေးက ရုနျးကနျသညျ..။ ပထမဆုံး ရုနျးကနျနသေညျ့ တရုတျမလေး၏ လကျနှငျ့ခွတေို့ကို ကွိုးမြားဖွငျ့ တုတျနှောငျသညျ..။ ထို့နောကျ အတငျးတကျခှကာ စောကျပတျထဲသို့ လီးသှငျးလရော တရုတျမလေးမှာ ဘယျလိုမှ ရုနျးကနျခွငျး မပွုနိုငျသဖွငျ့ ကပ်ပလီကွီး လိုးသမြှ ခံရလတေော့သညျ..။ တီဗီ ဖနျသားပွငျပျေါတှငျ အထငျးသားအရှငျးသား မွငျနရေသညျ့ ကွမျးတမျးပကျစကျလှသော မုဒိနျးကငျြ့မှု ပွကှကျမြားကို ကွညျ့ရငျး အေးအေးဝငျး၏ စိတျမြားသညျ ထိနျးမနိုငျ သိမျးမရတော့လောကျအောငျပငျ သောငျးကနျြးတကျကွှလာသညျ..။ မိမိအဖုတျကို ပွနျကာ လကျဖွငျ့ ပှတျမိသညျ..။
ထို့နောကျ စောကျစကေို့ ပှတျခမြေိသညျ..။ နောကျဆုံးတှငျ တော့ စောကျခေါငျးထဲသို့ လကျညှိုးထိုးထညျ့ကာ ကလိလကျြ တဈကိုယျတညျး အာသာဖွနေရေသညျ..။ ဤကဲ့သို့ ကိုယျ့အဖုတျကိုယျ ပွနျလညျကာ လကျညှိုးနှငျ့ ထိုး၍ ကာမရမ်မကျ အာသာဖွရေသညျ့ အလုပျမြိုး အေးအေးဝငျး မလုပျဖူးပါ..။ ယခု ရမ်မကျဇောအဟုနျ အလှနျကွှကာ တဏှာထနျလှနျးလာမှုကွောငျ့ လုပျမိလုပျရာ လုပျနမေိရာ အရသာ အတျောတှလေ့ကျြ အဖုတျကို ပယျပယျနယျနယျ ကလိပေးနမေိလတေော့သညျ..။ ကြျောမိုးသညျ မိမိ၏ အကွံကို လုပျသငျ့မလုပျသငျ့ အတျောလေး စဉျးစား၍ နသေညျ..။ ကြျောမိုးမှာ အသကျ ၂၀ ခနျ့ရှိသညျ..။ လူသာငယျသညျ ကာမစပျယှကျမှု အတှအေ့ကွုံတှကေတော့ ကောငျးကောငျးကွီး ရှိနသေညျ..။
သူသညျ မျောတျောကားမောငျးသညျ့ ဒရိုငျဘာ အဖွဈ အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုသျောလညျး တကယျတနျး စငျစဈမှာတော့ သူကားမောငျးသညျ့ အလုပျရှငျ အမြိုးသမီးမြား၏ ပြျောတျောဆကျအဖွဈ မွိုးမွိုးမွကျမွကျ ရအောငျ အကွံအဖနျလုပျနသေညျ့ သူဖွဈသညျ..။ သူသညျ အေးအေးဝငျးတို့ထံတှငျ အလုပျမလုပျခငျက ကုလားသူဌေး လူကုနျထံမြား အသိုငျးအဝိုငျးတှငျ အတျောလေး အလုပျဖွဈခဲ့သညျ..။ ကုလားသူဌေးကတျော အတျောမြားမြား၏ အိပျဖျောအဖွဈ ပြျောတျောဆကျခဲ့သညျ..။ ထို့ပွငျ မိနျးမလြှာဖွဈနသေော ကုလားသူဌေးသား အခြို့ကိုလညျး ကောငျးကောငျးကွီး ဖငျလိုးကာ ငှဝေငျလမျးဖွောငျ့ခဲ့သညျ..။ တိတျတိတျပုနျး ကမွငျးကွောထကွသညျ့ ကုလားသူဌေးကတျောမြား အသိုငျးအဝိုငျးတှငျ အလိုးကောငျး အဆျောကောငျးပွီး လီးကလညျး ကွီးလှသညျ့အတှကျ မွငျးသိုး ကြျောမိုး ဟူသော အမညျတဈလုံးဖွငျ့ ကြျောကွားနခေဲ့သညျ..။
သို့သျောအသားမညျးမညျး ကုလားမမြား ၊ အသားညိုညို ကုလားကပွားမမြား ၊ အသားလတျသော ကုလားမမြားကိုသာ လိုးခဲ့ဆျောခဲ့ရသညျ့အတှကျ ကြျောမိုးသညျ အသားဖွူဖွူဝငျးဝငျး တရုတျမကို လိုးခငျြသညျ့ စိတျတှေ ပွငျးပွလာခဲ့သညျ..။ သူကငျြလညျ ကြှမျးဝငျရာနရောမြားတှငျ ကုလားမမြားနှငျ့ ကုလားကပွားမမြားသာလငျြ ရှိနရော ကြျောမိုးအဖို့ လိုလားခကျြ ဆန်ဒ မပွညျ့နိုငျပဲ ရှိနခေဲ့ရာ ၊ အေးအေးဝငျးထံတှငျ ဒရိုငျဘာ အဖွဈ အလုပျရနိုငျအောငျ အထူးပငျ ကွိုးစားကွံစညျ ခဲ့ရသညျ..။ တရုတျမစဈစဈဖွဈသော အေးအေးဝငျးထံတှငျ အလုပျရနခေဲ့ပွီ ဖွဈသျောလညျး အေးအေးဝငျးကိုကား လိုးခှငျ့ မကွုံသေး..ပေ…။
ကြျောမိုးအဖို့လညျး ဘယျလိုစရမညျမှနျး မသိ ဖွဈနသေညျ..။ ကုလားသူဌေးကတျောမြားနှငျ့ ဆိုလငျြ ကြျောမိုးအနနှေငျ့ အထှအေထူး စနဖေို့ပငျ မလို..။ အမြိုးသမီးမြား ဘကျက စတငျကာ ခငျးပေးသောလမျးကို ကြျောမိုးက အသာလိုကျနငျးသှားရုံသာ ရှိခဲ့သညျ..။ အေးအေးဝငျးကတော့ ဘယျလိုမှ လမျးခငျးမပေးခဲ့သညျ့အတှကျ ၊ ကြျောမိုးမှာ အခကျတှနေ့သေညျ..။ သူအလှနျလိုးခငျြနသေော တရုတျမစဈစဈတဈယောကျနှငျ့ နီးကပျနပွေီ ဖွဈပါလကျြ လိုးခှငျ့ မကွုံရသညျ့အတှကျ ကြျောမိုးမှာ နစေ့ဉျပငျ အလှနျအနရေခကျ အထိုငျရခကျနသေညျ..။ အေးအေးဝငျးကို မှနျးဆစိတျကူးကာ ဂှငျးတိုကျ၍ သာနခေဲ့ရသညျ..။ သညျနတှေ့ငျတော့ အေးအေးဝငျးကို မုဒိနျးဝငျကငျြ့ရနျ ကြျောမိုးက ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ..။
အခါအခှငျ့ကလညျး အတျောကောငျးနသေညျ..။ အိမျတှငျ ထမငျးခကျြ ၊ အစခေံမြားလညျး မရှိ ။ ခငျမောငျကြျောကလညျး အလောတကွီး ထှကျသှားရာ အိမျကွီးပျေါတှငျ အေးအေးဝငျးတဈယောကျတညျးသာ ကနျြနခေဲ့သညျ..။ အိမျပျေါသို့ အသာတကျကာ အတငျးမုဒိနျးကငျြ့လငျြ အေးအေးဝငျး ဘာမြှ တတျနိုငျမညျ မဟုတျ..။ ပွီးတော့ မိမိ၏ ကာမစပျယှကျမှု ကြှမျးကငျြလိမ်မာပုံကိုလညျး ကြျောမိုးက အားကိုးအားထားသညျ..။ မိမိအတငျးလိုးတာကို ခံရပွီးလငျြ အေးအေးဝငျးက စှဲမကျသဘောကသြှားကာ မိမိ၏ အလိုးခံမလေး ဖွဈလာမညျဟု ကြျောမိုးက မြှျောလငျ့ထားသညျ..။ အကယျ၍ မြှျောလငျ့သလို ဖွဈမလာပါကလညျး ကိုယျလှတျရုနျးကာ ထှကျပွေးဖို့လညျး ကွိုတငျကွံစညျထားသညျ..။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ အေးအေးဝငျးကို တော့လိုးဖွဈအောငျ လိုးရမညျ..။
ထို့ကွောငျ့ ကြျောမိုးသညျ သူနထေိုငျရာ ကားဂိုဒေါငျအထပျခိုးပျေါမှ ဆငျးကာ အေးအေးဝငျးတို့ အိမျမကွီးဘကျသို့ ကူးလာခဲ့သညျ..။ ခငျမောငျကြျောက အလောတကွီး ထှကျသှား၍ သညျအတိုငျ ဖှငျ့ထားခဲ့သညျ့ တံခါးမှနေ၍ အိမျထဲသို့ အလှယျပငျ ဝငျရောကျလာခဲ့သညျ..။ တဈအိမျလုံး တိတျဆိတျနသေညျ..။ အိမျအောကျထပျရှိ အခနျးမြားထဲသို့ လိုကျကွညျ့ရာ အေးအေးဝငျးကို ဘယျအခနျးတှငျမှ မတှရေ့ပေ..။ နောကျဆုံးတှငျတော့ အပျေါထပျ အိပျခနျးမြားရှိရာသို့ ကြျောမိုးတကျလှမျးလာခဲ့လတေော့သညျ..။
ကြျောမိုး၏ စိတျထဲတှငျ အတျောပငျ လှုပျရှားသှားသညျ..။ သူသညျ ခငျမောငျကြျောနှငျ့ အေးအေးဝငျးတို့၏ အိပျခနျးထဲသို့ တဈကွိမျမြှ မရောကျဖူးပေ..။ သို့သျော အိမျအကွောငျး စူးစမျးလလေ့ာထားသူ ပီပီ အိပျခနျးတညျနရောကိုတော့ သိသညျ..။ အိပျခနျးနား ရောကျသညျနှငျ့ တပွှတျပွှတျ အသံမြား ညညျးညူ ရရှေတျသံမြား မောသံမြား ကို ကြျောမိုး စတငျကွားရသညျ..။ ခငျမောငျကြျောမြား တဈကြော့ပွနျလာကာ အေးအေးဝငျးကို လိုးနဆေျောနလေပွေီလားဟုပငျ ကြျောမိုးထငျမိသညျ..။ သခြောစရေနျအတှကျသာ ခပျဟဟဖွဈနသေော တံခါးကွားမှ ခြောငျးကွညျ့လိုကျရာ….။
ကြျောမိုးမှာ မကျြလုံးပွူးကာ ပါးစပျဟပွဲ သှားရတော့သညျ..။ သူမွငျလိုကျရသညျက အေးအေးဝငျးတဈယောကျ ဗလာကိုယျလုံးတီးဖွငျ့ ခုတငျထကျတှငျ ပကျလကျလဲလြောငျးကာ သူမအဖုတျကို လကျဖွငျ့ ပှတျကာ ထိုးဆှကာဖွငျ့ တဈကိုယျတညျး သောငျးကနျြးခငျြတိုငျး သောငျးကနျြးနမှေုနှငျ့ ရုပျမွငျသံကွားစကျတှငျ ထငျဟပျနသေော အပွာကား ပွကှကျမြားပငျတညျး..။ အခွအေနမှေနျကို ကြျောမိုး ခကျြခငျြး နားလညျ လိုကျသညျ..။ မိမိထငျထားသညျထကျပငျ အခွအေနပေိုကောငျးနကွေောငျးကိုလညျး ကြျောမိုး သဘောပေါကျလိုကျသညျ.။ ကြျောမိုးသညျ ခပျရဲရဲပငျ အိပျခနျးထဲ လြှောကျလှမျး ဝငျရောကျသှားသညျ..။
တီဗီပျေါမှ မွငျကှငျးမြားကို ကွညျ့ပွီး သောငျးကနျြးခငျြတိုငျး တဈကိုယျတညျး သောငျးကနျြးနသေော အေးအေးဝငျးမှာ အိပျခနျးထဲသို့ ကြျောမိုး ဝငျရောကျလာသညျကို မသိသေး…။ အဖုတျကို လကျဝါးစောငျးဖွငျ့ ပှတျလိုကျ ၊ အစကေို့ ဆှဲခလြေိုကျ ၊ စောကျခေါငျးထဲ လကျခြောငျး ထိုးသှငျးလိုကျ ၊ နို့တှကေို ပွနျနယျလိုကျနှငျ့ အရမျးကို ဖွဈခငျြတိုငျး ဖွဈနသေညျ..။ “ ဘယျလိုလဲ…အေးအေးဝငျး…ဖီလငျတှေ အရမျး တကျနပွေီလား……” ကြျောမိုးက အသံပွုလိုကျမှပငျ အေးအေးဝငျး လနျ့ဖွတျ၍ သှားကာ ဗလာကငျြးနသေော သူမ၏ ကိုယျလုံးကို ဖုးံကာရနျ ကွိုးစားသညျ..။
ခြှတျခထြားသညျ့ ထမီကို ကမနျးကတနျးပငျ လှမျးယူသညျ..။ “ အဝတျတှေ ဘာတှေ ဝတျဖို့ ကွိုးစားမနပေါနဲ့တော့ ဗြာ…..” ကြျောမိုး၏ အေးစကျစကျ ပွောလိုကျသော လသေံက ပိုငျနိုငျလှသညျ..။ ထိုသို့ ပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျ ပွောဆိုလိုကျသညျ့ စကားသညျ အေးအေးဝငျး ကို ကြောစိမျ့သှားစသေညျ..။ အေးအေးဝငျး မလှုပျရဲတော့..။ ထမီကို လကျဖွငျ့ ကိုငျရငျး ကြောကျရုပျလို ရပျနမေိသညျ..။ သညျလိုအခွအေနမြေိုး ကွုံရလိမျ့မညျဟု အေးအေးဝငျး တှေးထငျမထားခဲ့မိ…။ မိမိတဈယောကျတညျး မဟုတျတရုတျတှေ လုပျနမေိသညျ့အတှကျ ယခုလို အပွဈဒဏျ ခတျတာ ခံရခွငျးဖွဈမညျဟူ၍လညျး နောငျတကွီးစှာ ရမိသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ ကြျောမိုးကို စစေ့ပေ့ငျ မကွညျ့ရဲ..။
မိမိဖွဈခငျြတိုငျး ဖွဈနသေညျ့အခြိနျတှငျ ဒရိုငျဘာရောကျလာကာ အားလုံးသိမွငျသှားရလပွေီဟူသော အသိက အေးအေးဝငျးကို အရှကျကွီး ရှကျနစေသေညျ..။ အေးအေးဝငျး၏ စိတျထဲတှငျ သညျအိပျခနျးထဲတှငျ ကြျောမိုး ရှိမနဟေူ၍ အတငျးပငျ မဲတငျးကာ တှေးကွညျ့သညျ..။ သို့သျော အဝတျအစားမြား ခြှတျနသေညျ့အသံမြားက ကြျောမိုးရှိနကွေောငျး ဖျောကြူးနကွေသညျ..။ ထို့ပွငျ ကြျောမိုးက မညျသညျ့ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ယခုလို အဝတျတှေ ခြှတျနသေညျဆိုခွငျးကို စဉျးစားမိပွနျရာ အေးအေးဝငျးမှာ မကျြနှာပငျ မထားတတျတော့အောငျ ဖွဈရလကျြ ခေါငျးကိုသာ အတှငျငုံ့နမေိတော့သညျ..။
မိမိအနဖွေငျ့ ကြျောမိုးကို ဘယျလိုမြှ ဆနျ့ကငျြငွငျးဆနျခွငျ မပွုသာ..။ ကြျောမိုး၏ လကျခုတျထဲက ရဖွေဈသှားရတော့မညျကို အေးအေးဝငျး ကောငျးကောငျး သဘောပေါကျလိုကျသညျ..။ သူမ၏ အိပျခနျးသညျ ရုတျတရကျ သံလှောငျအိမျ အကဉျြးခနျးအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားသလို အေးအေးဝငျး ခံစားရသညျ..။ သူမအနဖွေငျ့ သညျအိပျခနျးထဲမှ ဘယျလိုမှ ရှောငျတိမျး ရုနျးမထှကျသာတော့..။
ကြျောမိုးသညျ ကိုယျအပျေါပိုငျးရှိ အဝတျမြားကို ခြှတျပဈကာ အောကျပိုငျးတှငျ ဝတျထားသညျ့ ဘောငျးဘီရှညျသာ ကနျြတော့သညျ..။ ကြျောမိုးသညျ ဘောငျးဘီရှညျကို မခြှတျသေးပဲ ကွောကျလနျ့စှာ ရပျနရှောသညျ့ အေးအေးဝငျးထံ ခဉျြးကပျလာသညျ..။ အေးအေးဝငျးသညျ သူမ၏ အသားဆိုငျမြားကို တတျနိုငျသမြှ မပျေါလှငျရလအေောငျ ခပျကုတျကုတျလေး ရပျနသေညျ..။ သို့သျော ကြျောမိုးအနနှေငျ့ကား တရုတျမစဈစဈလေးတဈယောကျ၏ ဗလာကငျြးနသေော ကိုယျလုံးကို မွငျနရေသညျကပငျ စိတျရိုငျးတှကေို နိုးကွှနစေသေညျ..။ အသားမညျးသော အသားညိုသော ကုလားမမြား..၊ ကုလားကပွားမမြား၏ ကိုယျလုံးတီးမြားကိုသာ မွငျခဲ့ရဖူးသော ကြျောမိုးအဖို့ တရုတျမစဈစဈလေး၏ ဖွူနုနသေော ကိုယျလုံးကိုယျထညျသညျ မကျမောဖှယျရာပငျ…။ အေးအေးဝငျးသညျ ငွိမျသကျစှာ ရပျနသေညျ..။ ခေါငျးကိုလညျး ငုံ့ထားမိသညျ..။
ရှကျစိတျကွောကျစိတျတို့ကွောငျ့ အသကျရှူပွငျးနရော သူမ၏ မို့ဝနျးလုံးအိသော ရငျသားအစုံသညျ နိမျ့လိုကျမွငျ့လိုကျနှငျ့ လှုပျရှားနသေညျ..။ “ နငျ နှာထ နတော မဟုတျသလိုလို ဘာလိုလို ဟနျဆောငျမနနေဲ့…တရုတျမ..၊ နငျ့ကိုယျနငျ ဘာတှလေုပျပွီး ဘယျလိုဖွဈနတေယျဆိုတာ ငါ ကောငျးကောငျးကွီး မွငျရပွီးပွီ…၊ နငျ့ဖာသာ နငျ တဈယောကျတညျး စိတျဖွနေတောထကျ ကောငျးတာကို ငါလကျတှလေု့ပျပွမယျ….၊ ဒီတော့ အိုကျတငျ ခံမနနေဲ့တော့…။ ကဲ…ငါတို့ လိုးကွရအောငျ….” ကြျောမိုးသညျ ခါတိုငျးဆိုလငျြ အေးအေးဝငျးကို ရိုရိုသသေေ ဆကျဆံသညျ..။ ယခုတှငျတော့ မိမိဘကျက အပိုငျအနိုငျ ကိုငျထားမိပွီဖွဈကွောငျး ရိပျမိသညျ့အတှကျ တမငျပငျ ရငျ့ရငျ့သီးသီး စကားလုံးမြား သုံးကာ ပွောသညျ..။ ထိုသို့ပွောရငျး ကြျောမိုးသညျ တရုတျမလေး အေးအေးဝငျးကို ဆှဲဖကျသညျ..။
ထိုအခါတှငျမှ အေးအေးဝငျးသညျ လပျြစဈဓါတျဖွငျ့ အတို့ခံလိုကျရသလို လှုပျရှားသှားသညျ..။ ကြျောမိုး၏ ဆှဲဖကျမှုမှ လှတျအောငျ အတငျးပငျ ကနျကြောကျ ရုနျးထှကျသညျ..။ သူမ၏ ရုနျးကနျမှုမြားသညျ ဘာမြှ အရာမရောကျတော့..။ ကနျြးမာသနျစှမျးပွီး ဂြူဒိုပညာ အတျောအသငျ့တတျထားသူ ကြျောမိုးက ရုနျးကနျနသေော အေးအေးဝငျးကို ကောငျးကောငျး ခြုပျထိနျးထားနိုငျသညျ..။ အေးအေးဝငျးခမြာ ကြျောမိုး၏ ရငျခှငျထဲတှငျ ကော့ကော့လေး ရောကျသှားသညျ..။ လုံးဝနျးစူကွှနသေော ရငျသားနှဈမှာသညျ ကြျောမိုး၏ ရငျဘတျကယျြကွီးနှငျ့ အိခနဲ ထိကပျမိသညျ..။ ထိုသို့ ထိတှမှေု့ကွောငျ့ အေးအေးဝငျးတဈကိုယျလုံး ကွကျသီးတှေ ထကာ နို့သီးခေါငျးလေးမြား ကော့ခြှနျလာကွသညျ..။ အေးအေးဝငျးမှာ အလိုလိုနရေငျး မောဟိုကျလာကာ ရငျတုနျပနျးတုနျ ဖွဈနရေတော့သညျ..။ ရုနျးဖယျထှကျရနျပငျ အားမရှိတော့…။
“ ဟငျ့အငျး….ဟငျ့အငျး…..” အေးအေးဝငျးသညျ သူမ၏ ဝတျလဈစလဈ ကိုယျလုံးကို ကြျောမိုး၏ ရငျခှငျထဲမှ တှငျတှငျ လူးလှနျ့နရေငျးက ငွငျးဆနျနသေညျ…။ “ ကမြကို လှတျပါ….ဖယျပါရှငျ့….၊ အို…အို..တျောပါတော့ရှငျ……ဒီ….ဒီ လိုမလုပျပါနဲ့….ဒါ..ဒါ အတငျး မတရား မုဒိနျးကငျြ့တာ…ပဲ…ဖယျ..ဖယျ……..” အေးအေးဝငျးက ပါးစပျမှ အတငျးကွိုးစားကာ ပွောဆိုငွငျးဆနျသညျ..။ “ နငျကတော့ မုဒိနျးကငျြ့တာလို့ ချေါခငျြလိမျ့မယျ….၊ ငါ့အနနေဲ့ကတော့ လိုးတာပါပဲ..ဟဲဟဲ……” ကြျောမိုးက ရယျမော ပွောဆိုသညျ..။ ထိုအခြိနျတှငျ ကြျောမိုး၏ လကျတဈဖကျသညျ အေးအေးဝငျး၏ ကားစှငျ့အိစကျသော တငျပါးဆုံကွီးကို အားရပါးရပငျ ဆုပျကိုငျပှတျသပျနသေညျ..။ ဖငျးသားကွီးနှဈခုအကွားတှငျလညျး လကျညှိုးကို ထိုးထညျ့ထားသညျ..။
“ နငျ့ကို ငါရှငျးရှငျးပဲ ပွောမယျ….၊ တကယျတော့ မုဒိနျးကငျြ့တယျဆိုတာ မရှိဘူး…. မိနျးမတိုငျး အလိုးခံခငျြကွတာခညျြးပဲ….၊ ဒါပမေယျ့ စိတျရှိတိုငျး အလိုးခံလို့ မသငျ့ဘူးထငျတာကွောငျ့ မုဒိနျးကငျြ့ ခံရသလေး…ဘာလေး ပွောကွတာ…၊ နငျလညျး အတူတူပါပဲ…လေ..၊ နငျ့စောကျဖုတျမှာ အရညျတှေ ရှဲပွီး အလိုးခံခငျြလှနျးလို့ ရှစိရှစိ ဖွဈနတော နငျလဲ အသိပဲ…၊ ဒီတော့ ရုနျးမနစေမျးပါနဲ့….၊ အလိုးခံမှာသာ ခံစမျးပါ…၊ တရုတျမရဲ့….” ဒရိုငျဘာဖွဈသူ၏ ကွမျးတမျး နငျ့သီးစှာ တဈတဈခှခှ ပွောလိုကျသညျ့ စကားမြားကွောငျ့ အေးအေးဝငျးမှာ အလှနျရှကျပွီး အလှနျလညျး တုနျလှုပျသှားသညျ..။ သို့သျော ကြျောမိုး ပွောသလို သူမသညျ အလှနျပငျ အလိုးခံခငျြကာ အဖုတျထဲတှငျ အရညျကွညျတှေ ရှမျးရှမျးဝကော စိုရှဲနရေသညျကလညျး အမှနျပငျဖွဈကွောငျးကိုလညျး အေးအေးဝငျး မငွငျးနိုငျ…။ ဝနျခံရပမေညျ….။
ဗီဒီယို အပွာကားကွညျ့ရငျး တကျကွှခဲ့သော အေးအေးဝငျး၏ ကာမရမကျဆန်ဒသညျ လငျယောကျြား ခငျမောငျကြျောနှငျ့ မစို့မပို့ စခနျးသှားခဲ့ရမှုကွောငျ့ ထိနျးမနိုငျ တော့အောငျ ဆူဝကွှေတကျကာ အဖိုဓါတျကို အလှနျအမငျး လိုလား တမျးတနကွေသညျ..။ ဆနျ့ကငျြဘကျ လိငျ၏ ထိတှမှေု့ကို အာသာငမျးငမျး စောငျ့လငျ့နကွေသညျ..။ ဒါကိုလညျး အေးအေးဝငျးက နားလညျသညျ..။ ထိုရမ်မကျစိတျမြား၏ လှုံ့ဆျောလှမျးမိုးမှုကွောငျ့ အေးအေးဝငျးခမြာ အတငျးရုနျးကနျ ထှကျလိုလကျြနှငျ့ မစှမျးသာ..။ ကြျောမိုး၏ အပွုအမူ အကိုငျအတှယျမြားကို မလိုလားပါပဲနှငျ့ မငွငျးသာပဲ ဖွဈနရေရှာသညျ..။ ကြျောမိုးကတော့ အလှနျပငျ လကျသှကျနသေညျ..။ ဖကျပှထေ့ားသော အေးအေးဝငျးကို စောစောကပငျ သူ့လငျနှငျ့ စိတျတူကိုယျတူ အပြျောကြူးခဲ့ရာ ခုတငျပျေါသို့ ပှတေ့ငျလိုကျသညျ..။
“ ဟငျ့အငျး…..ဟငျ့အငျး…..လှတျ လှတျ…..ကမြကို လှတျ……” အေးအေးဝငျးသညျ အတတျနိုငျဆုံး ကွိုးစားငွငျးဆနျနရှောသေးသညျ..။ “ နငျက အေးအေးသကျသာ လိုးတာကို မကွိုကျပဲ ခပျကွမျးကွမျး အတငျးကငျြ့တာမြိုးကို သဘောကတြာကိုး…။ ရပါတယျ….ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ နငျက ငါ့ကို လိုးပေးဖို့ နောကျဆုံးမှာ တောငျးပနျရမှာကတော့ သခြောပါတယျ…..” အေးအေးဝငျး၏ ငွငျးဆနျရုနျးကနျနမှေုမြားကို ကြျောမိုးက ဒေါသမထှကျမိပေ….။ သူသညျ မိနျးမအတျောမြားမြားကို လိုးခဲ့ဖူးရာ နှာထနျနသေော မိနျးမမြားသာ ဖွဈပွီး ထိုအမြိုးသမီးမြား၏ ရမ်မကျဇောကို သူကပါဝငျဖွညျ့တငျးပေးရသညျ့ သဘောမြိုးသာ ဖွဈခဲ့သညျ..။ ယခုမူ ငွငျးဆနျရုနျးကနျနသေော အေးအေးဝငျးကို အပိုငျအနိုငျ ကိုငျကာ အရလိုးရမညျမို့ တဈမူထူးနသေညျ..။ ကြျောမိုး၏ လကျတဈဖကျက စောကျဖုတျပျေါ ရောကျလာသညျ..။ အကှဲကွောငျးအား လကျခြောငျးတဈခြောငျးဖွငျ့ မှသေညျ..။
“ တျောပါတော့….ရှငျ….တျောပါတော့………အို……အဟငျ့…..” စောကျခေါငျးထဲ လကျခြောငျး လြှောခနဲ ဝငျသှားရာ..အေးအေးဝငျးခမြာ ကောငျးကငျပျေါမှ ကလြာသယောငျ ခံစားရကာ ရငျထဲ အေးခနဲ ဖွဈသှားသညျ..။ ကြျောမိုး၏ ကငျြလညျသော လကျမြားက စောကျစကေို့ ဆော့ကစားလာပွနျသညျ…။ ပှတျခပြေေးသညျ..။ အေးအေးဝငျးမှာ ဖငျတရမျးရမျး ရငျတကော့ကော့နှငျ့ ရမ်မကျသှေးတှေ ဆူဝလောသညျ..။ ပါးစပျမှလညျး တဟငျးဟငျး အသံမြား မွညျလာသညျ..။ သတိတဈခကျြ လှတျသှားသညျနှငျ့ ရမ်မကျဇော အာရုံနောကျ သှေးသားမြား ပါဝငျသောငျးကနျြးကုနျကွသညျ…။
အေးအေးဝငျးသညျ ဤအဖွဈကို နားလညျကာ အားတငျးလကျြ ရုနျးကနျပွနျသညျ….။ နှုတျခမျးအား သှားဖွငျ့ တငျးတငျးကိုကျထားရာ သှေးပငျ စို့လာသညျ..။ သတိလှတျကာ ရမ်မကျဇောတှေ ဟုနျးခနဲ တကျကွှမလာအောငျ အားတငျးကာ နရေသညျ..။ တရုတျမလေး၏ နှုတျဖြားမှ တဏှာရမ်မကျကွှသံ တဟငျးဟငျး စတငျပျေါလာသညျနှငျ့ သညျပှဲတှငျ မိမိ အောငျမွငျပွီ ဖွဈကွောငျး ကြျောမိုး သဘောပေါကျသှားသညျ..။ ခဏအကွာတှငျ အေးအေးဝငျးက ရုနျးကနျ ငွငျးဆနျလာပွနျရာ အိနွေ်ဒဆညျနိုငျရနျ အားခဲ၍ လုပျဆောငျခွငျးဖွဈသညျကိုလညျး ကြျောမိုးက အကဲခတျမိလိုကျလတေော့သညျ………ပွီးပါပွီ။
ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ ၊ စနေနေ့ ဖြစ်သည်..။ သည်နေ့သည်ရက်ဟာ အခြားသူတွေ အတွက်တော့ ထူးခြားမည် မဟုတ်သော်လည်း ကိုခင်ကျော်နှင့် မအေးအေးဝင်းတို့အတွက်တော့ ထူးခြားသည့်နေ့ ရက် တစ်ရက် ဖြစ်သည်..။ သူတို့နှစ်ယောက် အိမ်ထောင်ကျသည်မှာ နှစ် နှစ်ကျော်သာ ရှိသေးသည်..။ ချစ်လို့ ခင်လို့ ချလို့ လိုးလို့ မဝသေးပဲ ကောင်းတုန်း…။ ဒါပေမယ့် သူတို့ လင်မယားနှစ်ယောက် ချစ်တင်းနှီးနှော ကာမစပ်ယှက်ကြရသည့် အချိန်များက နည်းပါးလှသည်..။ ဒါကလည်း ကျန်းမာရေ ချို့တဲ့နေကြလို့ မဟုတ်..။ သူတို့၏ ကြီးပွားရေး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကြောင့် ဖြစ်သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရ တစ်ယောက်ဖြစ်ကာ အစိုးရဌာနတစ်ခုတွင် အရာရှိမ တစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသည်..။
ခင်မောင်ကျော်ကတော့ အစိုးရ အလုပ်မလုပ်..။ ကိုယ်ပိုင် အရောင်းအဝယ် အလုပ်သာ လုပ်သည်..။ အသက်အရွယ်ကလည်း ငယ် ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ကလည်း ကောင်း ၊ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ကောင်းသည့်အတွက် စီးပွားဖြစ်ခဲ့သည်..။ ငွေတွေရသလောက် အလုပ်ကိုလည်း နေ့နေ့ညညဆိုသလို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခဲ့ပေရာ ၊ ခင်မောင်ကျော်မှာ မယားချောလေးနဲ့အတူ ကာမစပ်ယှက်ရန် အချိန် မပေးနိုင်ခဲ့..။ သို့ပေမယ့် လတစ်လ၏ ပထမဆုံးသော စနေနှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်တော့ လုံးဝ အားလပ်ခွင့်ယူကာ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး လိုးကြဆော်ကြဖို့ ရက်သတ်မှတ်ထားခဲ့ကြသည်..။ ထိုနှစ်ရက်တွင် ခင်မောင်ကျော်သည် စီးပွားရေး အလုပ်များကို ရပ်နားသည်..။
အိမ်ရှိ ထမင်းချက်နှင့် အိမ်ဖော် မိန်းခလေးတို့ကိုလည်း အားလပ်ခွင့် ပေးလိုက်သည်..။ အေးအေးဝင်း၏ ကားကို မောင်းသော ဒရိုင်ဘာ ကျော်မိုးသာလျင် အိမ်တွင် ရှိသည်..။ သို့သော် ကျော်မိုး၏ ကားဂိုဒေါင်မှာ အိမ်နှင့် သီးခြားဖြစ်ပြီး ကျော်မိုးသည် ကားဂိုဒေါင် အပေါ် ထပ်ခိုးပေါ်တွင် နေရသောကြောင့် အေးအေးဝင်းနှင့် ခင်မောင်ကျော်တို့နှစ်ယောက်မှာ အိမ်ပေါ်တွင် လွပ်လွပ်လပ်လပ်နှင့် စိတ်တိုင်းကျ အပျော်ကြူး ကာမစပ်ယှက်နိုင်သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် မြန်မာ အမည်ခံယူထားသော်လည်း တရုပ်မ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်..။ ခေတ်ပညာတတ် သော်လည်း အရှက်အကြောက် ကြီးသည်..။ အေးအေးဝင်း၏ မိဘများသည် ရှေးဆန်သော တရုတ်မိသားစုများ ဖြစ်ကြပေရာ အေးအေးဝင်းကို အထူးပင် ကြပ်မတ်အုပ်ထိန်းထားခဲ့ကြသည်..။
ခင်မောင်ကျော်သည် အေးအေးဝင်းကို ကာမစပ်ယှက်မှုသည် ရှက်စရာ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆံရန်အတွ က် တော်တော်လေးပင် ပြောဆိုစည်းရုံးခဲ့ရသည်..။ ခင်မောင်ကျော်အဖို့ ဇနီးချောလေးကို ကိုယ်လုံးတီးချွတ်၍ ကာမစပ်ယှက်နိုင်သည်မှာ သုံးလပင် မပြည့်သေး..။ လီးစုပ်ပေးရန်ကိုကား တစစ ပြောဆို သိမ်းသွင်းနေရဆဲ ဖြစ်သည်..။ တရုတ်မလေး အေးအေးဝင်းကို ကာမစပ်ယှက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရဲတင်းလာရန် စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရာတွင် ခင်မောင်ကျော်က အပြာကားများကို အသုံးချခဲ့သည်..။ ပထမတွင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း နမ်းစုပ်ခန်း ၊ ဝတ်လစ်စလစ် ပွေ့ဖက်ကိုင်တွယ်ခန်းများ ပါသည့် ကားတွေကို ပြသည်..။ ထို့နောက် ဂျပန်ကားများကို ပြကာ သိမ်းသွင်းသည်..။ နောက်တော့မှ သိပ်မကြမ်းသည့် အပြာကားများကို ပြခဲ့သည်..။ အပြာကား စပြသည့်နေ့က ခင်မောင်ကျော်အဖို့ မိမိ၏ လီးအား အေးအေးဝင်းကို လက်ဖြင့် စ၍ ကိုင်တွယ်ပေးစေနိုင်ခဲ့သည်..။
နောက်တော့ ဆုပ်ကိုင် ဂွင်းတိုက်ပေးသည့်အဆင့်ထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်..။ ယနေ့တွင်တော့ အေးအေးဝင်းကို လီးစုပ်ခိုင်းရန် နှင့် အခွင့်သာမည် ဆိုပါက ဖင်ကိုပါ လိုးရန် ခင်မောင်ကျော်က ကြံရွယ်ထားသည်..။ ထို့ကြောင့် လီးစုပ်ခန်းနှင့် ဖင်ဆော်ခန်းများ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပါဝင်သည့် အပြာကားထုပ်ကို အထူးရွေးချယ်ကာ ငှါးရမ်းလာခဲ့သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ခုမှ အသက် ၂၅ နှစ်ခန့်သာ ရှိသေးသည်..။ အသားဖြူဝင်းကာ ရင်ထွားထွား ၊ တင်ကားကား ၊ ပေါင်လုံးတုတ်တုတ်နှင့် ကိုယ်ကာယ အထူးပင် တောင့်တင်း ဖွံ့ထွားသည်..။ ကျန်းမာရေးကောင်းကာ သွေးသား ဆူဖြိုးလျက် တရုတ်မပီပီ နှာလည်း ထန်သည်..။ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် အုပ်ထိန်းခြင်း ခံခဲ့ရသည့်အတွက်ကြောင့်သာ အရှက်အကြောက် ကြီးနေခြင်း ဖြစ်သည်..။
ခင်မောင်ကျော်က အပြာကားတွေ ပြသကာ သိမ်းသွင်းသည်တွင် အေးအေးဝင်းမှာ ရမ္မက်စိတ်တွေ ထက်သန် တက်ကြွလာရသည်..။ ဤတွင် သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ချစ်ခင်ပြီး တရားဝင် လက်ထပ်ယောက်ျားလည်း ဖြစ်သော ခင်မောင်ကျော်ထံမှောက်တွင် အရှက်အကြောက်တွေကို တစ်ထစ်ချင်း ဖြေလျှော့ပေးခဲ့သည်..။ ဗြုန်းစားကြီး ရက်ရက်ရောရော ကာမစပ်ယှက်မှုကို မပြုရဲ သော်လည်း တစစတော့ ခင်မောင်ကျော်၏ စိတ်တိုင်းကျ လိုက်လျောလာရပေးမည်..။ ခင်မောင်ကျော်မှာလည်း အသက် ၂၈ နှစ်ခန့် ရှိကာ တရုတ်အစစ် မဟုတ်သော်လည်း တရုတ်ကပြားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်..။ ကာမအားလည်း သန်သည်..။ နံနက် ၁၀ နာရီ ………..။ ခင်မောင်ကျော်နှင့် အေးအေးဝင်းတို့ လင်မယားသည် ခုတင်ခေါင်းရင်းကို ကျောမီကာ ယှဉ်ထိုင်နေကြရင်း တီဗီပေါ်မှ ထင်ဟပ်ပြသနေသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ကြည့်နေကြသည်..။
ပြကွင်းပေါ်တွင်မူ မော်တော်ကားကြီးတစ်စီး စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ရှေ့တွင် ရပ်ပြီး ကားမောင်းသမားသည် ကားပေါ်မှ ဆင်းလျက် ဆိုင်ထဲ ဝင်သွားသည်..။ ထို့နောက် ပြကွင်းပြောင်းကာ ဆိုင်အတွင်းဘက် မြင်ကွင်းပေါ်လာသည်..။ ကောင်တာတွင် ထိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးကို အဓိကထား၍ ရိုက်ပြထားသည်..။ အမျိုးသမီးသည် အသက် ၂၀ ခန့် သာ ရှိသေးသည်.. ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့် ချောမောလှပသည့် ဗိုလ်မလေး ဖြစ်သည်..။ ထိုင်ခုံတွင် ခပ်ဟော့ဟော့လေး ထိုင်နေရာမှ လုံးကျစ်ထွားအိသော တင်သားဆိုင်များနှင့် တင်းရင်း ရှည်လျားသွယ်ပြောင်းသည့် ပေါင်လုံးပေါင်တန်များသည် တင်းကြပ်စွာ ဝတ်ထားသော အသားကပ် ဂျင်းဘောင်းဘီရှည် အောက်တွင် ထင်ရှားစွာ ပေါ်လွင်နေသည်..။
တီရှပ် ခပ်ပါးပါး လေးကလည်း မို့ဝန်းချွန်ကော့နေသည့် ရင်သားဆိုင်များကို ပေါ်လွင်နေစေသည်..။ ကားမောင်းသမားသည် တံခါးကိုဖွင့်ကာ ဆိုင်ထဲ လျှောက်လှမ်း ဝင်ရောက်လာပြီး ကောင်မလေး ရှေ့မှ ထိုင်ခုံတွင် ဝင်ထိုင်သည်..။ “ ဆိုင် မသိမ်းသေးဘူးလား…ဂျိန်း….” ဟု ကားမောင်းသမားက မေးသည်..။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ပညာတတ်များ ဖြစ်သည်မို့ ကောင်းစွာပင် နားလည်ကြသည်..။ “ သိမ်းကာနီးပါပြီ…..မိုက်ကယ်…၊ မင်းရောက်လာပြီ ဆိုတော့ အခုပဲ သိမ်းလိုက်တော့မယ်…၊ ဒါမှ တို့အတွက် အချိန်ပိုရမှာ…” ဂျိန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သူ ဗိုလ်မလေးက ခပ်ပြုံးပြုံးလေး ပြန်ပြောသည်..။ ဤမျှလောက် ကြည့်ရလျင် မကြာခင် ဗိုလ်မလေးကို မိုက်ကယ်ဆိုသူက လိုးတော့မှာ အေးအေးဝင်း သိလိုက်သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ကောင်မလေးကို လိုးပြတော့မည့် အမျိုးသား သရုပ်ဆောင်ကို သေသေချာချာ ကြည့်သည်..။
မိုက်ကယ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်သူသည် အသက် ၃၀ ခန့် ရှိပြီး အသားမည်းမည်း ကပ္ပလီကပြား တစ်ယောက်ဖြစ်သည်..။ အဝေးပြေး ကားမောင်းသမား ရုပ်ပီသသည်..။ မုတ်ဆိတ်မွှေး နှုတ်ခမ်းမွှေး သဲ့သဲ့ ရှိသည်..။ မျက်နှာလေးထောင့်ကျကျနှင့် ရုပ်ရည် ကြမ်းတမ်းသည်..။ ရုပ်ရည် ကြမ်းကြမ်းနှင့် အသားမည်းမည်း လူကြမ်းကြီးတစ်ယောက်က ဖြူဖြူနုနု ချောမောလှပသည့် ဗိုလ်မလေးကို လိုးတော့မှာမို့ တွေးရင်း ကောင်မလေးအား သနားမိသလိုလို အေးအေးဝင်း ခံစားရသည်..။
ပြကွင်း ပြောင်းသွားသည်..။ အပြာကားများ၏ ထုံးစံအတိုင်း အပိုတွေ သိပ်မပြပါ..။ ပြောင်းသွားသည့် ပြကွင်းမှာ လူရှင်းပြီး မီးမှောင်နေသည့်ဆိုင်အတွင်း ပြကွင်းကို ခဏ ပြပြီးနောက် အိပ်ခန်းတစ်ခုကို ပြောင်းသွားသည်..။ အိပ်ခန်းထဲသို့ ကောင်မလေးက ရှေ့ဆောင်ဝင်ကာ ကပ္ပလီကြီးက နောက်မှ လိုက်လာသည်..။ ကောင်မလေး၏ တသိမ့်သိမ့် လှုပ်သွားသော တင်သားများကို အသားပေးပြသည်..။ ကောင်မလေးသည် ခုတင်ဘေးတွင် ခပ်ကြွကြွလေး ရပ်သည်…။ မိုက်ကယ်က မိမိလိုးရတော့မည့် မိန်းမကို အားရပါးရ ကြည့်သည့်သဘောမျိုးဖြင့် ကင်မရာသည် ကောင်မလေး၏ ခေါင်းကနေ ခြေဖျားတိုင် အနီးကပ် တဖြည်းဖြည်းချင်း ရွေ့လျားကာ ရိုက်ပြသည်..။ ထို့နောက် မိုက်ကယ်က ဂျိန်း၏ တီရှပ်ကလေးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။
အတွင်းခံ ဘရာစီယာပင် စည်းနှောင်ထားခြင်း မရှိသည့်အတွက် မို့ဝန်းသော ရင်သားဆိုင်နှစ်ခုသည် အထင်းသား ပေါ်လာသည်..။ နောက် ကောင်မလေး၏ ဘောင်းဘီကို ဆက်ချွတ်သည်..။ ထိုအချိန်တွင် ခင်မောင်ကျော်ကလည်း ဇနီးချော ကလေး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်တွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ခပ်သွက်သွက်ပင် ချွတ်ပစ်နေသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ပြကွင်းပေါ်ရှိ စုံတွဲ၏ အဝတ်ချွတ်ပေးနေပုံများကို ကြည့်ရင်း ခင်မောင်ကျော်ပြုသမျှကို မသိကျိုးကျွန် ပြုပြီး ငြိမ်ခံနေသည်..။ အေးအေးဝင်း ဝတ်ထားသော အပေါ်အင်္ကျီ ကျွတ်သွားသည်..။ နောက်တော့ အတွင်းခံ ဘရာစီယာ၏ ချိတ်ကို ခင်မောင်ကျော်က ဆက်ဖြုတ်သည်..။ ဘရာစီယာသည် ထစ်ခနဲ တစ်ချက်ဖြစ်ပြီး ချိတ်ပြုတ်ကာ ကျွတ်ကွာကျသွားသည်..။ အေးအေးဝင်း၏ ရင်သားဆိုင်များသည် ဖြူနုကာ လုံးဝန်းနေသည်..။ ခင်မောင်ကျော်သည် ဇနီးချောလေးကို အလွန်ချစ်သည့်အတွက် ရင်သားများကို ဘယ်တော့မှ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း မကိုင်…။
ခပ်ဖြည်းဖြည်းသာသာလေး အုပ်ကိုင် ပွတ်သပ်သည်..။ ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်သက် ၂ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည့်တိုင် အေးအေးဝင်း၏ ရင်သားဆိုင်များသည် အပျိုစင်ဘဝကနှင့် ဘာမျှ မခြားပဲ လုံးလုံးဝန်းဝန်း ဆူဆူဖြိုးဖြိုးလေးနှင့် လှပနေဆဲ..။ တင်းရင်းနေဆဲ ပဲ ဖြစ်သည်..။ ခင်မောင်ကျော်သည် အေးအေးဝင်း၏ ထမီကို ဆက်ချွတ်သည်..။ နောက်တော့ အတွင်းခံ ပင်တီလေးကိုပါ ချန်မထားတော့..။ ပြကွင်းပေါ်ရှိ ဗိုလ်မလေး ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားချိန်တွင် အပြင်ဘက်ရှိ အေးအေးဝင်းသည်လည်း ဗလာကျင်းသွားလေပြီ..။ ကပ္ပလီကြီးက သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်တွေကို ဆက်ချွတ်သည်..။ ထိုသို့ ကပ္ပလီကြီး အဝတ်တွေ ချွတ်နေပုံကို အေးအေးဝင်းက စူးစိုက်ကြည့်နေသည်..။ ထိုအချိန်တွင် ခင်မောင်ကျော်ကလည်း သူ့ကိုယ်ပေါ်မှ အဝတ်တွေကို သွက်လက်မြန်ဆန်စွာပင် ချွတ်ခွာချလိုက်သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ခင်မောင်ကျော် အဝတ်ချွတ်နေသည့်ဖက်သို့ လှည့်မကြည့်နိုင်..။
ကပ္ပလီကြီး အဝတ်ချွတ်နေသည့် မြင်ကွင်းကိုသာ စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်နေမိသည်..။ အေးအေးဝင်း ယခင်ကြည့်ဖူးခဲ့သည့် အပြာကားများတွင် အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်များသည် လူဖြူဘိုများသာ ဖြစ်ရာ မြင်ခဲ့ရသည့် လီးတွေကလည်း အဖြူတွေချည်းသာ ဖြစ်သည်..။ သူ့လင် ခင်မောင်ကျော်မှာလည်း တရုတ်ကပြားဖြစ်၍ လီးကလည်း ဖြူသည်..။ ကပ္ပလီကြီး၏ လီးမည်းမည်းကြီးသည် အေးအေးဝင်းအဖို့ အဆန်းမို့ စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်နေခြင်း ဖြစ်သည်..။ နောက်ဆုံး ကျန်နေသော အောက်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်၍ တန်းခနဲ ပေါ်လာသည့် ကပ္ပလီကြီး၏ လီးကို မြင်ရသောအခါ အေးအေးဝင်း၏ ရင်ထဲတွင် ဒိန်းခနဲပင် ခုန်သွားရသည်..။ မည်းနက်နေသည့် လီးကြီး၏ အရောင်အသွေးကပင် အသည်းယားစရာ…။ ပြီးတော့ လီးကြီးက ကြီးမားထွားကြိုင်းလွန်းလှသည်..။
အေးအေးဝင်း စိတ်ထင် ထိုလီးကြီးသည် မရှိဘူးဆို ဆယ်လက်မလောက်တော့ ရှည်မည်..။ လုံးပတ်ကလည်း ကိုကာကိုလာ သံဗူးလောက်ကို တုတ်သည်..။ မာန်ထကာ တောင်မတ်နေချိန်မို့ ဒုံးပျံကြီးတစ်ခုလို တန်းနေလျက် လီးတန်လုံးပတ်တလျှောက်တွင် အကြောတွေ ပြိုင်းပြိုင်းထနေသည်မှာ မျှော့ကြီးများ ရစ်ပတ်နေသလားဟု ထင်ရသည်..။ အေးအေးဝင်း အလိုးခံဖူးသော ခင်မောင်ကျော်၏ လီးမှာ ရှစ်လက်မခန့် ရှည်လျားပြီး ကျပ်လုံးလောက် တုတ်သည်..။ ထို့ပြင် အပြာကားများထဲတွင် မြင်ဖူးသမျှဆိုပါက အကြီးဆုံးလီးသည် ကိုးလက်မက်နီးပါးခန့်သာ ရှည်သည်..။ ယခုမြင်ရသည့် လီးမည်းကြီးကတော့ အေးအေးဝင်းမြင်ဖူးသမျှတွင် အကြီးဆုံး အတုတ်ဆုံး ဖြစ်သည်..။ ထိုလီးတန်မည်းမည်းကြီးသည် အေးအေးဝင်းကို ညှို့ယူဖမ်းစားလိုက်သည်..။ သည်လို ကြီးမားတုတ်ခိုင်သော လီးတန် မည်းမည်းကြီးနှင့် အလိုးခံကြည့်ချင်သည့် စိတ်များလည်း တဖွားဖွား ပေါ်လာသည်..။
သို့သော် ကပ္ပလီကြီးသည် တီဗီထဲက ထွက်လာကာ အေးအေးဝင်းကို လိုးမည်မဟုတ်..။ သူနှင့်တွဲဖက် ဗိုလ်မလေးကိုသာ ကောင်းကောင်းလိုးပြမည်..။ ထို့ကြောင့် အေးအေးဝင်းသည် သူမကို လက်တွေ့လိုးပေးနိုင်သည့် လင်တော်မောင်၏ လီးဖြူဖြူကိုသာ လက်ဖြင့် လှမ်းဆုတ်ကိုင်လိုက်ရသည်..။ ဆိုးတော့ မဆိုးပါ..။ ပြကွင်းပေါ်ရှိ လီးမည်းမည်း ထွားထွားကြီးကို သေသေချာချာကြည့်ရင်း ခင်မောင်ကျော်၏ လီးကို ဆုပ်ကိုင်ထားရာ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ထဲတွင် လီးမည်းကြီးကို ကိုင်ထားရသလိုမျိုးတော့ ခံစားရသည်..။ “ ကိုယ့်လီး ကိုစုတ်ပေးလေကွယ်….” ကပ္ပလီကြီးက ဗိုလ်မလေးကို လှမ်းပြောသည်..။ “ ဟွန်း…သူကတော့ ဒါပဲ…” ကောင်မလေးက ပြုံးပြုံးလေး ပြောကာ ၊ ကပ္ပလီကြီး၏ ခြေရင်းတွင် ဒူးတုပ်ထိုင်ချလိုက်သည်..။ ကင်မရာ၏ ရိုက်ကွင်းက ပြောင်းသွားသည်..။
ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသော လီးတန်မည်းမည်းကြီးကို အနီးကပ် ရိုက်ပြသည်..။ ပြကွင်းတစ်ခုလုံးတွင် လီးမည်းမည်းတုတ်တုတ်ကြီးဖြင့် ပြည့်နေသည်..။ လီးကြီးကို အသေးစိတ် သေသေချာချာ မြင်ရပေရာ အေးအေးဝင်းမှာ စိတ်အထူးလှုပ်ရှားလာလျက် ဆုပ်ကိုင်ထားသော ခင်မောင်ကျော်၏ လီးဖြူဖြူကို ဂွင်းတိုက်ပေးမိသည်..။ နောက်တော့ ကင်မရာက နောက်ဆုတ်လိုက်ရာ လီးမည်းမည်းကြီး၏ အနားတွင် မော့မော့လေး ပြုထားသော ကောင်မလေး၏ မျက်နှာ ပေါ်လာသည်..။ ကောင်မလေး၏ သေးသွယ်ပျော့ပျောင်းသော လက်ကလေးတစ်ဖက်ကို ဆန့်ထုတ်ကာ လီးမည်းမည်းကြီးကို ဆုပ်ကိုင်သည်..။ လီးကြီးက ကြီးမားမည်းနက်လျက် သွယ်ပြောင်းသည့် လက်ချောင်းဖြူဖြူလေးများနှင့် ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပုံမြင်ကွင်းသည် တကယ်ပင် အသည်းယားစရာ..ကောင်းလှသည်..။
ခင်မောင်ကျော်၏ လက်များက အေးအေးဝင်း၏ ရင်သားဆိုင်များကို ခပ်ရွရွလေး ပွတ်သပ်လာသည်..။ ထို့နောက် ကောင်မလေးသည် ပါးစပ်လေးကို အစွမ်းကုန် ဟကာ လီးထိပ်ဖျားကို ငုံလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ အသာရှေ့သို့တိုးလိုက်ရာ ငုံမိထားသော လီးကြီးသည် ကောင်မလေး၏ ပါးစပ်ထဲ တိုးဝင်သွားသည်..။ အဆုံးထိတော့ မဝင်..။ တစ်ဝက်မရှိတရှိသာ ဝင်၏..။ ကောင်မလေးသည် ပါးလေးများ ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက် ဖြစ်အောင် စုပ်ပေးရာ လီးစုတ်သံ တပြွတ်ပြွတ်ကို ပင် အေးအေးဝင်း အတိုင်းသား ကြားရသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ထိုလီးမည်းမည်းကြီးကို စုတ်ချင်စိတ်တွေ ဟုန်းခနဲ ထလာသည်..။ ထို့ကြောင့် ခင်မောင်ကျော်၏ လီးကိုပင် လီးမည်းကြီးဟု သဘောထားကာ ကုန်း၍ စုပ်ပေးလိုက်မိတော့သည်..။ “ ဟား…အူး..ဟား…ဟား…” အထူးအထွေ မတိုက်တွန်းရပါပဲ အေးအေးဝင်းက လီးကို စုပ်ပေးလာ၍ ခင်မောင်ကျော် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်ကာ ပါးစပ်မှ အသံတွေပင် ထွက်သွားသည်..။
ထိုအချိန်တွင် ပြကွင်းထဲရှိ ကပ္ပလီကြီးကလည်း ကောင်မလေး၏ လီးစုပ်ပေးမှုကို ကျေနပ်စွာအံကြိတ် ရေရွတ်လိုက်သည်နှင့် အံကိုက် တိုက်ဆိုင်သွားရာ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ထဲတွင် ထိုလူကြီး၏ လီးမည်းမည်းကြီးကို မိမိပါးစပ်ဖြင့် စုတ်ပေး၍ ထိုလူကြီး ကျေနပ်သဘောကျသွားသည့်အလား ခံစားရကာ ပြကွင်းပေါ်ရှိ ကောင်မလေးနှင့် အပြိုင်ပင် ခင်မောင်ကျော်၏ ငပဲကြီးကို သဲသဲမဲမဲပင် အားရပါးရ စုပ်ပေးနေသည်..။ ကောင်မလေးသည် လီးချောင်းကြီးကို စုတ်ပေးရာမှ ပါးစပ်ကိုခွာကာ ဂွေးဥမည်းမည်းကြီးများကို ကုန်း၍ စုပ်ပေးပြန်သည်..။ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ထဲတွင် ဂွေးဥကို စုတ်ပေးလိုစိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်လာသည်..။ အကယ်၍ ထိုအချိန်တွင် ခင်မောင်ကျော်ကသာ အေးအေးဝင်း၏ ခေါင်းကို အောက်သို့ဆွဲချပြီး ဂွေးဥကို ယက်ခိုင်းစုပ်ခိုင်းပါက အေးအေးဝင်းအနေဖြင့် မငြင်းတမ်းပင် ပြုလုပ်ပေးမှာ သေချာသည်..။ သို့သော် လီးစုတ်ပေးတာကိုပင် အတော်ဟုတ်ပြီ ထင်နေသော ခင်မောင်ကျော်သည် ရှေ့သို့ သိပ်အတင့်မရဲဝံ့သေး..။
ခင်မောင်ကျော်က လမ်းပြ တောင်းဆိုခြင်း မပြုသည့်အတွက် အေးအေးဝင်းမှာ ဂွေးဥများကို စုတ်ကြည့်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း သူမကိုယ်တိုင် စတင်၍ မပြုလုပ်ရဲပေ..။ ထို့ကြောင့် လီးကိုသာ ပို၍မဲကာ စုတ်ပေးနေရာ ခင်မောင်ကျော်မှာ ရင်ထဲ ဖိုအေးကာ တစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေထလျက် အလွန်ပင် ဇိမ်တွေ့နေလေသည်..။ ပြကွင်းက ပြောင်းသွားပြန်သည်..။ လီးစုတ် ဂွေးဥယက်ပေးနေပုံကို အဝေးမှ ရိုက်ပြသည်..။ ကပ္ပလီကြီးက ကောင်မလေး၏ ခေါင်းကို အသာဆွဲကာ ကောင်မလေး ပါးစပ်မှ သူ့လီးကြီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်..။ “ ခုတင်ပေါ် တက်ကြစို့ …” ကပ္ပလီကြီးက ပြောသည်..။ ကောင်မလေးသည် မဆိုင်းမတွပင် ခုတင်ပေါ် တက်ကာ ပက်လက်လှန်အိပ်လိုက်သည်..။ ခုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်လှန်အိပ်နေသည့် ကောင်မလေးကို အနီးကပ် ရိုက်ပြထားသည်..။
ကောင်မလေးက ပေါင်လုံးကြီးနှစ်လုံးကို အဆင်သင့်ပင် ကား၍ ပေးထားရာ စောက်ဖုတ်ကြီး ပြဲအာလျက် စပ်ယှက်ရာ စောက်ခေါင်းပေါက်ကလေးက ထင်ရှားစွာ ပေါ်နေသည်..။ ကပ္ပလီကြီးက ကားထားသော ပေါင်လုံးကြီးနှစ်ခုအကြားတွင် ဝင်ကာ နေရာယူသည်..။ ကင်မရာက ရှေ့သို့ တိုးလာသည်..။ လီးတန်မည်းမည်းနက်နက်ကြီး ဖြူနုနေသည့် စောက်ဖုတ်ဝတွင် တေ့ထောက်လိုက်ပုံကို အနီးကပ် ရိုက်ပြသည်..။ ထို့နောက် ကင်မရာက နောက်သို့ပြန်အဆုတ်တွင် ကပ္ပလီကြီးက ခါးကော့လျက် လီးကို ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်..။ လီးတန်မည်းမည်းတုတ်တုတ်ကြီး စောက်ဖုတ်လေးထဲ သို့ ချိုင့်ဝင်အောင် နစ်မြုတ်သွားသည်ကို အသည်းယားဖွယ်ရာ မြင်နေရသည်..။ အေးအေးဝင်း မနေနိုင်တော့..။ အလိုးခံချင်စိတ်များက ထိန်းမနိုင်တော့အောင် ဖြစ်လာသည်..။ ထို့ကြောင့် လီးစုတ်ပေးနေရာက အသာခွာပြီး ခုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်အိပ်လိုက်သည်..။
ခင်မောင်ကျော်ကလည်း အထာပေါက်ကာ အေးအေးဝင်း၏ ကိုယ်ပေါ်တက်ခွလျက် ပေါင်ကြီးကို ဖြဲထားလိုက်သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် မျက်စိကို မှိတ်ထားသည်..။ ခင်မောင်ကျော်၏ လီးက အေးအေးဝင်း၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ လျှောခနဲ တိုးဝင်လာသည်..။ ထို့နောက် ခင်မောင်ကျော်သည် သွက်သွက်လေးပင် ဆောင့်လိုးသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ခင်မောင်ကျော် ဆောင့်လိုးနေတာကို ခံရင်း အသာမျက်စိကို ခပ်မှေးမှေး ဖွင့်ကာ တီဗီပြကွင်းကို လှမ်းကြည့်သည်..။ အေးအေးဝင်းအိပ်နေသည့် နေရာမှဆိုလျင် မြင်ကွင်းကို ကောင်းကောင်းမြင်ရသည်..။ ကပ္ပလီကြီးသည် ကောင်မလေး၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် တလှုပ်လှုပ်ဖြင့် တအားလိုးနေသည်..။ ကောင်မလေးသည် အောက်မှနေ၍ ဖင်ကြီးကို ကော့ကာပင့်ကာ လှုပ်ရှားပေးသည်..။ တုတ်ဖြိုးသော ပေါင်တန်ကြီးများကိုလည်း မြှောက်ကွေးကာ ပေးသည်..။ ထို့ပြင် တအားလိုးနေတဲ့ ကပ္ပလီကြီး၏ ကျောပြင်ကိုလည်း လက်ဖြူဖြူနုနုလေးများဖြင့် သိုင်းဖက်ရင်း ပွတ်ပေးနေသည်..။ အေးအေးဝင်းသည်လည်း ပြကွင်းပေါ်ရှိ ကောင်မလေး လုပ်သလို လိုက်လုပ်မိသည်..။
သူမ၏ စိတ်ထဲတွင် သူမ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထိုးဝင်ပြန်ထွက်နှင့် လိုးနေသည်မှာ ခင်မောင်ကျော်၏ လီးဖြူဖြူ မဟုတ်ပဲ ကပ္ပလီကြီး၏ ဆယ်လက်မကျော် ရှည်လျားသည့် လီးမည်းမည်းတုတ်တုတ်ကြီး ဖြစ်သည်ဟု တွေးထင် ခံစားနေသည်..။ ကပ္ပလီကြီး၏ ဆောင့်ချက်များသည် အလွန်မြန် အလွန်ကြမ်းလှရာ စက်သေနပ်ပစ်နေသလားပင် ထင်ရသည်..။ အေးအေးဝင်းအဖို့ တစ်နှစ်သုံးလေး လိုက်လံရေတွက်သည်မှာပင် မမှီနိုင်တော့..။ အောက်မှ အလိုးခံနေသော ကောင်မလေးသည် မျက်တောင်လေး မှေးစင်းကာ နှုတ်ခမ်းလွှာ နီနီလေးကို ခပ်စူစူပြုလျက် လိုးနေသူကို တစ်စုံတစ်ရာ ပြောလိုက်သည်..။ ခင်မောင်ကျော်၏ ဆောင့်လိုးနေသံများကြောင့် အေးအေးဝင်း မှာ ကောင်မလေး ဘာပြောလိုက်သည်ကို မကြားမိတော့ပေ..။ ကောင်မလေး ပြောလိုက်သည်မှာ … “ ငါလေးဖက်ကုန်းပေးမယ်…၊ ဖင်ထဲကိုထည့်ပြီး ဖင်လိုးပေးနော်….” ဟူသတည်း…..။
ထိုစကားကိုသာ ကြားမိပါက အေးအေးဝင်း၏ စိတ်အစဉ် တစ်မျိုး လှုပ်ရှားမိမည်မှာ မလွဲပေ..။ ကပ္ပလီကြီးက ခေါင်းငြိမ့်ပြပြီး အဆောင့်ရပ်ကာ ကောင်မလေး၏ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးတန်ကြီးကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်သည်..။ ကောင်မလေးသည် ချက်ချင်းပင် လှဲအိပ်နေရာမှ ထကာ ဒူးတုတ်၍ ဖင်ပူးတောင်း ထောင်ကာ ကုန်းပေးသည်ကို အေးအေးဝင်း မြင်နေရသည်..။ ကပ္ပလီကြီးသည် ကုန်းပေးထားသော ကောင်မလေး၏ ဖင်ကြီးနောက်တွင် ဒူးထောက်နေရာယူကာ ဖင်သားနှစ်ခြမ်းကို ဆွဲဖြဲလျက် စအိုဝတွင် သူ့လီးမည်းမည်းကြီးကို တေ့လိုက်ရာ ကြည့်နေသူ အေးအေးဝင်းမှာ ရင်ထဲ ဒိန်းခနဲ လှုပ်ရှားလျက် ခပ်မှေးမှေး ဖြစ်နေသော မျက်လုံးများပင် ပြူးကျယ်ဝိုင်းစက်သွားသည်..။ အေးအေးဝင်း၏ ကိုယ်ပေါ် တက်ခွကာ လိုးနေသူ ခင်မောင်ကျော်မှာမူ ကျောပေးထားသဖြင့် ထိုမြင်ကွင်းကို မမြင်ရ..။ ဖင်ပြောင်ကြီး နိမ့်လိုက်ကြွလိုက်ဖြင့်သာ အားရပါးရ ဆောင့်လိုး၍ နေသည်..။ “ ကလင်….ကလင်….ကလင်….” တယ်လီဖုန်း ခေါင်းလောင်းသံက ရုတ်တရက် မြည်လာသည်..။
ခင်မောင်ကျော်မှာ အတော်ပင် ထိတ်လန့်သွားမိသည်..။ ထိုတယ်လီဖုန်းသည် သာမန် ရိုးရိုး တယ်လီဖုန်း မဟုတ်..။ ခင်မောင်ကျော်၏ လူယုံတော် မန်နေဂျာ ကိုတိတ်ကြည်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားသည့် အထူးသီးသန့် ရေဒီယို တယ်လီဖုန်း ဖြစ်သည်..။ အလွန်အရေးကြီးသည့် ကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်ဖြစ်ပွားမှသာလျင် ဆက်သွယ်အသုံးပြုရသည်..။ ယခုလို အရေးပေါ် တယ်လီဖုန်း အသံမြည်လာသည့်အတွက် ကောက်ယူနားထောင် မကြည့်မီကပင် ၊ မိမိ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အထူးအရေးကြီးသည့် ကိစ္စတစ်ခုခု ပေါ်ပေါက်ပြီ ဆိုခြင်းကို ခင်မောင်ကျော် နားလည်လိုက်သည်..။ ဇနီးချောလေးကို တက်လိုး၍ ကောင်းနေတုန်း ဖြစ်သော်လည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို မျက်ကွယ်ပြု၍ မဖြစ်သောကြောင့် ခင်မောင်ကျော်သည် ထိုအရေပေါ်တယ်လီဖုန်းကို ကောက်ယူနားထောင်လိုက်သည်..။ လီးကိုကား အဖုတ်တွင် တပ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်..။
ဆောင့်လိုးနေခြင်းကာ မရှိတော့..။ အလိုးခံ၍ ကောင်းတုန်း အဆောင့်ရပ်သွားသောကြောင့် အေးအေးဝင်းမှာ အတော်ပင် မချင့်မရဲ နှင့် ဒေါသပင် ဖြစ်မိသည်..။ တယ်လီုဖုန်းကို နားထောင်နေရင်း ခင်မောင်ကျော်၏ မျက်နှာ ကွက်ခနဲ ပျက်သွားသည်..။ စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးလည်း ချက်ချင်းပင် ပျော့ခွေကာ ကျွတ်ထွက်သွားသည်..။ “ ကျိုင်းတုံဖက်က ချလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပြဿနာ တက်နေလို့တဲ့….၊ ဒုက္ခပါပဲ…အေးရယ်…၊ မောင် လိုက်သွားမှ ဖြစ်လိမ့်မယ်….” ခင်မောင်ကျော်သည် တယ်လီဖုန်း ပြောပြီးသည်နှင့် အမောတကော ရေရွတ်ကာ အဝတ်အစားများ အမြန်ဝတ်ကာ ငွေအိတ်နှင့် အရေးပေါ် ခရီးဆောင်အိတ်ကို ဆွဲလျက် ကမန်းကတန်းပင် ပြေးထွက်သွားသည်..။ ယခုလို မကြာခဏ သွားရတတ်၍ အရေးပေါ် ခရီးဆောင်အိတ်ကို လိုအပ်သည်များ အသင့်ထည့်ကာ ပြင်ဆင်ထားရမြဲ ဖြစ်သည်..။
ခါတိုင်း အရေပေါ် ခရီးထွက်သည်က မဆန်းသော်လည်း ခုလို အချိန်အခါမျိုးတွင် ဗြုန်းစားကြီး ထွက်သွားရတာမျိုးတော့ မရှိခဲ့ဖူးသေးပေ…။ ကျိုင်းတုံမှ ပစ္စည်းများသည် ခင်မောင်ကျော်၏ စီးပွားရေး တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာစေနိုင်သလို ၊ ချွတ်ခြုံကျသွားစေလောက်အောင်လည်း ပြုနိုင်သောကြောင့် ခင်မောင်ကျော် မှာ ဇနီးချောလေးကို ပြီးအောင် ဆက်မလိုးနိုင်တော့ပဲ ကိုယ်လုံးတီးနှင့် အိပ်ခန်းထဲတွင် သည်အတိုင်း ထားရစ်ခဲ့ကာ အပြေးအလွှားပင် ထွက်ခွာသွားရပေတော့သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် မကျေမနပ် ဒေါပွ၍ နေသည်…။
ဒါပေမယ့် ဘာကို ဒေါသဖြစ်ရမှန်းတော့ မသိ..၊ ကျိုင်းတုံမှ ပစ္စည်းတွေ အရေးကြီးမှန်းလည်း သိထားသည်မို့ အပြေးအလွှား ထွက်သွားရရှာသည့် လင်တော်မောင်ကိုလည်း အပြစ် မတင်လိုပါ..။ ကာမအရသာ ဆပ်တငံ့ငံ့ ဖြစ်သွားရမှုကြောင့် မချင့်မရဲနှင့် မကျေနပ်မှုတို့ကို သွန်ထုပ်ကာ တစ်ယောက်တည်း ငိုရှိုက်နေမိသည်..။ အားရအောင် ငိုလိုက်ရ၍ စိတ်ထဲအနည်းငယ် ပေါ့ပါးသွားသည်..။ တဏှာဇောရမ္မက်ကတော့ မပျောက်သေး..။ တငွေ့ငွေ့ လောင်မြိုက်နေဆဲ..။ အေးအေးဝင်း၏ နားထဲတွင် အသံများ ကြားနေရသည့်အတွက် မော့ကြည့်လိုက်ရာ တီဗီမှာ ပြသနေဆဲ ဖြစ်သည်ကို မြင်ရသည်..။ အောက်စက်ခလုပ်ကိုလည်း မပိတ်မိသေးသောကြောင့် အခွေက ဆက်လက်လည်ပတ်ကာ အပြာကား ပြကွက်များသည် ဆက်လက်ပေါ်လွင်နေဆဲ ဖြစ်သည်..။ လူသူ ကင်းရှင်းနေသည့် လမ်းမကြီးတစ်ခုဘေးနားတွင် ခပ်အေးအေး လျှောက်လှမ်းလာနေသော တရုတ်မလေးတစ်ယောက်ကို ပြကွင်းထဲတွင်မြင်ရသည်..။
ဇာတ်လမ်းက ဘယ်နေရာက ဘယ်လိုပြောင်းနေသည်ကိုကား အေးအေးဝင်း မသိတော့..။ ကားလမ်းပေါ်တွင် ကားနက်တစ်စီး အသာမောင်းလာနေပုံ တွေ့ရသည်..။ ကားသည် တရုတ်မလေး၏ ဘေးနားတွင် ရပ်သွားသည်..။ တရုတ်မလေး၏ အလန့်တကြား ဖြစ်သွားသည့်မျက်နှာကို အနီးကပ် ရိုက်ပြသည်..။ ထို့နောက် ကားပေါ်မှ လူတစ်ယောက် ခုန်ထွက်လာကာ တရုတ်မလေး၏ ခေါင်းကို ရိုက်ချလိုက်ရာ တရုတ်မလေး ခွေကျသွားသည်..။ သတိလစ်သွားပုံရသည်..။ ကားပေါ်မှ ခုန်ထွက်လာသူမှာ စောစောကအပိုင်းတွင် ဗိုလ်မလေးကို လိမ့်နေအောင် လိုးပြခဲ့သည့် ကပ္ပလီကြီးပင် ဖြစ်သည်..။ ထိုလူကြီးသည် ယခု တရုတ်မလေးကို လိုးပြအုံးမည်ကို သိရသည်တွင် အေးအေးဝင်း ရင်ခုန်လာသည်..။ မျက်လုံးကလည်း ပြကွင်းမှ မခွာနိုင်တော့ ။ စက်ကိုပိတ်ကာ အေးအေးလူလူ အနားယူတော့မည်ဟူသော စိတ်ကူးတွေလည်း ပျောက်ကုန်သည်..။ ဇာတ်ကားကို ဆက်၍ ကြည့်နေမိသည်..။ သည်အပြာကားကို ကူးထားလိုက်ရလျင် ကောင်းမည်လားဟု တွေးမိကာ ဗီဒီယိုရိုက်သည့် ကင်မရာကို လှမ်းကြည့်မိသည်..။
ထိုကင်မရာဝယ်ထားသည်မှာ မကြာသေး..။ ကင်မရာထဲတွင် ခွေလွတ်အသစ်တစ်ခွေကလည်း အသင့်ထည့်ထားပြီး ဖြစ်သည်..။ အောက်စက်က တစ်လုံးတည်းသာရှိရာ အကယ်၍ ကူးယူလိုပါက ပြကွင်းပေါ်တွင် ထင်နေသည်များကို ဗီဒီယိုကင်မရာဖြင့် ပြန်ရိုက်ယူရမည် ဖြစ်သည်..။ အချိန်ကလည်း အများကြီးရှိသေးသည့်အတွက် ဇာတ်ကားကို အရင်ပြီးအောင် ကြည့်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။ ပြီးမှသာ အေးအေးဆေးဆေး ပြန်လည်၍ ကြိုက်သည့်အကွက်များကို ရိုက်ကူးယူထားတော့မည်..။ အေးအေးဝင်း တီဗီကို ပြန်ကြည့်သည်..။ ကပ္ပလီကြီးက သတိလစ်နေသော တရုတ်မလေးကို ပုခုံးထက်တွင် ထမ်းတင်ကာ ကားပေါ်ပစ်တင်ပြီး ကားမောင်းထွက်သွားသည်ကို ပြသကာ ပြကွင်းပြောင်းသွားသည်..။ ပြန်ပေါ်လာသည့် ပြကွင်းသည် အိပ်ခန်းတစ်ခု ဖြစ်သည်..။ တစ်ယောက်အိပ်ခုတင် တစ်ခု အခန်းထဲတွင် ရှိနေသည်..။
ကပ္ပလီကြီးသည် တရုတ်မလေးကို ထမ်းကာ အခန်းထဲ ဝင်လာပြီး ခုတင်ပေါ်တင်လိုက်သည်..။ တရုတ်မလေးသည် သတိရနေပြီ ဖြစ်သည်..။ ခုတင်ပေါ်တွင် ထထိုင်ကာ ကပ္ပလီကြီးကို အလန့်တကြားကြည့်နေသည်.။ “ ဘယ်လိုလဲ..နင်အခု ငါလိုးတာ ခံရတော့မယ်…မဟုတ်လား..၊ အေးအေးဆေးဆေး အလိုးခံရင် နင်သက်သာမယ်..” ကပ္ပလီးကြီးက တရုတ်မလေးကို ကြည့်ပြီးပြောသည်..။ တရုတ်မလေးခမျာ စကားပြန်မဆိုနိုင်ရှာပါ..။ ကြောက်လွန်းသည့်အမူအယာဖြင့် ခေါင်းတစ်ခါခါ လုပ်ပြနေရှာသည်..။ ကင်မရာက ကပ္ပလီကြီးကို အနီးကပ် ရိုက်ပြနေသည်.။ “ ကဲ….အဝတ်တွေ ချွတ်လိုက်စမ်း…” ကပ္ပလီကြီးက မာန်ပါပါ ပြောသည်..။ တရုတ်မလေး၏ အနီးကပ် ရိုက်ချက်ပေါ်လာသည်..။ “ ဟင့်အင်း….ဟင့်အင်း….” ကောင်မလေးက ငိုမဲ့မဲ့ အမူအရာလေးဖြင့် ပြောသည်..။ အသံကလည်း တုန်ရင်နေသည်..။ အတော်ကို သရုပ်ဆောင် ပီပြင်သည်..။ နောက်ပြကွင်းက တရုတ်မလေး၏ အဝတ်များကို ကပ္ပလီကြီးက ဆုတ်ဖြဲ ဆွဲချွတ်ပုံဖြစ်သည်..။ ပထမဆုံး တရုတ်မလေး ဝတ်ထားသည့် ဘလောက်စ် အင်္ကျီကို ဆွဲဖြဲပစ်သည်.။ နောက်တော့ ဘရာစီယာလေးကိုပါ ဆောင့်ဆွဲချွတ်သည်..။
ကောင်မလေး၏ အထက်ပိုင်း ဗလာကျင်းသွားကာ ဖြူနုထွားမို့သည့် ရင်သားလုံးလုံးဝန်းဝန်းများက တုန်ခါလျက် ပေါ်လာသည်..။ ထိုရင်သားများကို အနီးကပ် ရိုက်ပြရာ ဖြူနုနေသော ရင်သားမို့မို့များတွင် အကြောစိမ်လေးများ ယှက်သန်းနေပုံနှင့် လက်သန်းဖျားခန့်ရှိမည့် နို့သီးချွန်ချွန်လေးများ ကော့စူထောင်တက်နေသည်ကို အထင်အရှားမြင်ရသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် အလိုလိုပင် သူမ၏ နို့သီးများကို ကိုင်ကြည့်မိသည်..။ သူမ၏ နို့သီးများမှာလည်း တရုတ်မလေး၏ နို့သီးလေးများလိုပင် လက်သန်းဖျားလောက် ရှည်ကာ ချွန်ကော့ ထောင်တက်နေသည်..။ ကပ္ပလီကြီးသည် ကုန်း၍ တရုတ်မလေး၏ နို့သီးကို ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်သည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ယောက်ယမ်းကာ မိမိ၏ နို့သီးများကို လက်ညှိုးလက်မတို့ဖြင့် ဖျစ်ညှစ်ကြည့်မိသည်..။ မိမိ၏ နို့သီးများကို ကပ္ပလီကြီးက စုတ်ပေးနေသလားဟုပင် ထင်မိသည်..။
ပြကွင်းပေါ်တွင်တော့ ကပ္ပလီကြီးက တရုတ်မလေး၏ နို့တွေကို အားရပါးရပင် တအားစုတ်နမ်းနေသည်..။ နို့သီးများ သာမက နို့အုံကြီးတဝက်ခန့်ပင် ကပ္ပလီကြီး၏ ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေသည်..။ ဒါကိုကြည့်ရင်း အေးအေးဝင်းသည် သူမ၏ ရင်သားများကို အလိုလို ကော့ပေးမိသည်..။ တရုတ်မလေးသည် အကြောက်အကန် ငြင်းဆန်နေသည်..။ လက်သီးဆုပ်များဖြင့် ကပ္ပလီကြီးကို ထုသည် ရိုက်သည်..။ အတင်းတွန်းပစ်သည်..။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုမှ တွန်းဖယ်ပစ်၍ မရပါ..။ ကပ္ပလီကြီးက နို့သီး ဖြူနုနုလေးများကို အားရပါးရပင် စုတ်နမ်းနေလေသည်..။
ထို့နောက် ကပ္ပလီကြီးက တရုတ်မလေး၏ စကပ်တိုနံ့နံ့လေးကို အတင်းဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ရာ ဖြူဖွေးဖွေး ဖင်သားကြီးများသည် မလုံ့တလုံ အတွင်းခံပင်တီ ဘောင်းဘီတိုလေး၏ အကာအကွယ်ကြားမှ တစ်ထွက်၍ ပေါ်လာကြသည်..။ ကပ္ပလီကြီးက တရုတ်မလေးကို ခုတင်ပေါ်တွန်းလှဲချလိုက်သည်..။ ခုတင်ပေါ် ပက်လက်လန်လဲကျသွားသည့် တရုတ်မလေးကို အနီးကပ်ရိုက်ပြသည်..။ တရုတ်မလေးသည် ပေါင်လေးကားလျက် လဲကျနေရာ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီခွဆုံတွင် မို့မို့လေး ဖောင်းအိနေပုံနှင့် ရင်သားအစုံ အိအိလေး တုန်ခါနေသည်တို့ကို အထင်းသာ မြင်နေရသည်..။
တရုတ်မလေး၏ မျက်နှာတွင်လည်း ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေသည့် ဟန်က အထင်အရှား ပေါ်လွင်နေသည်..။ ကပ္ပလီကြီးသည် ခုတင်ထက်သို့ တက်လာကာ တရုတ်မလေး၏ ပင်တီလေးကို အတင်းဆွဲချွတ်ပစ်သည်..။ တရုတ်မလေးက အတင်းရုန်းကန်ပြီး နှစ်ယောက်သာ ထွေးလားလုံးလား ဖြစ်နေပုံကို အတော်ကြာကြာ ရိုက်ပြထားသည်..။ တရုတ်မလေး၏ ပင်တီ ကျွတ်တော့မလို မကျွတ်တော့မလို ဖြစ်နေပုံမှာ ကြည့်နေရသူ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ကို ကျလိကျလိ ဖြစ်စေသည်..။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ကောင်မလေး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ဘောင်းဘီလေး ကျွတ်ကွာကျကာ လုံးဝ ကိုယ်လုံးတီး ဖြစ်သွားရလေသည်..။ ကပ္ပလီကြီးလည်း ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်နေသော ကောင်မလေးကို မျက်လုံးများအရောင်တလက်လက်ထကာ ကြည့်နေသည်..။ ကပ္ပလီကြီးသည် အတွင်းခံဘောင်းဘီလေးတော့ ဝတ်ထားဆဲ ဖြစ်သည်..။
အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်မှ ထိုးထိုတောင်ထောင် ဖြစ်နေသည့် လီးကြီးမှာ တောင်မတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အေးအေးဝင်း မြင်ရုံနှင့် သိသည်..။ တရုတ်မလေးသည် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်သော ကပ္ပလီကြီးကို ကြောက်လန့်စွာနဲ့ ကြည့်နေရှာသည်..။ မည်းနက်ကာ တောင်မတ်နေသော လီးကြီးက အမြောက်ကြီးတစ်လက်လို မတ်မတ်ကြီး ထောင်လျက်သား ပေါ်လာသည်..။ ထို့နောက် ကပ္ပလီကြီးက တရုတ်မလေးကို အတင်းဖက်သည်..။ ကောင်မလေးက ရုန်းကန်သည်..။ ပထမဆုံး ရုန်းကန်နေသည့် တရုတ်မလေး၏ လက်နှင့်ခြေတို့ကို ကြိုးများဖြင့် တုတ်နှောင်သည်..။ ထို့နောက် အတင်းတက်ခွကာ စောက်ပတ်ထဲသို့ လီးသွင်းလေရာ တရုတ်မလေးမှာ ဘယ်လိုမှ ရုန်းကန်ခြင်း မပြုနိုင်သဖြင့် ကပ္ပလီကြီး လိုးသမျှ ခံရလေတော့သည်..။ တီဗီ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် အထင်းသားအရှင်းသား မြင်နေရသည့် ကြမ်းတမ်းပက်စက်လှသော မုဒိန်းကျင့်မှု ပြကွက်များကို ကြည့်ရင်း အေးအေးဝင်း၏ စိတ်များသည် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရတော့လောက်အောင်ပင် သောင်းကျန်းတက်ကြွလာသည်..။ မိမိအဖုတ်ကို ပြန်ကာ လက်ဖြင့် ပွတ်မိသည်..။
ထို့နောက် စောက်စေ့ကို ပွတ်ချေမိသည်..။ နောက်ဆုံးတွင် တော့ စောက်ခေါင်းထဲသို့ လက်ညှိုးထိုးထည့်ကာ ကလိလျက် တစ်ကိုယ်တည်း အာသာဖြေနေရသည်..။ ဤကဲ့သို့ ကိုယ့်အဖုတ်ကိုယ် ပြန်လည်ကာ လက်ညှိုးနှင့် ထိုး၍ ကာမရမ္မက် အာသာဖြေရသည့် အလုပ်မျိုး အေးအေးဝင်း မလုပ်ဖူးပါ..။ ယခု ရမ္မက်ဇောအဟုန် အလွန်ကြွကာ တဏှာထန်လွန်းလာမှုကြောင့် လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်နေမိရာ အရသာ အတော်တွေ့လျက် အဖုတ်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ကလိပေးနေမိလေတော့သည်..။ ကျော်မိုးသည် မိမိ၏ အကြံကို လုပ်သင့်မလုပ်သင့် အတော်လေး စဉ်းစား၍ နေသည်..။ ကျော်မိုးမှာ အသက် ၂၀ ခန့်ရှိသည်..။ လူသာငယ်သည် ကာမစပ်ယှက်မှု အတွေ့အကြုံတွေကတော့ ကောင်းကောင်းကြီး ရှိနေသည်..။
သူသည် မော်တော်ကားမောင်းသည့် ဒရိုင်ဘာ အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသော်လည်း တကယ်တန်း စင်စစ်မှာတော့ သူကားမောင်းသည့် အလုပ်ရှင် အမျိုးသမီးများ၏ ပျော်တော်ဆက်အဖြစ် မြိုးမြိုးမြက်မြက် ရအောင် အကြံအဖန်လုပ်နေသည့် သူဖြစ်သည်..။ သူသည် အေးအေးဝင်းတို့ထံတွင် အလုပ်မလုပ်ခင်က ကုလားသူဌေး လူကုန်ထံများ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အတော်လေး အလုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်..။ ကုလားသူဌေးကတော် အတော်များများ၏ အိပ်ဖော်အဖြစ် ပျော်တော်ဆက်ခဲ့သည်..။ ထို့ပြင် မိန်းမလျှာဖြစ်နေသော ကုလားသူဌေးသား အချို့ကိုလည်း ကောင်းကောင်းကြီး ဖင်လိုးကာ ငွေဝင်လမ်းဖြောင့်ခဲ့သည်..။ တိတ်တိတ်ပုန်း ကမြင်းကြောထကြသည့် ကုလားသူဌေးကတော်များ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အလိုးကောင်း အဆော်ကောင်းပြီး လီးကလည်း ကြီးလှသည့်အတွက် မြင်းသိုး ကျော်မိုး ဟူသော အမည်တစ်လုံးဖြင့် ကျော်ကြားနေခဲ့သည်..။
သို့သော်အသားမည်းမည်း ကုလားမများ ၊ အသားညိုညို ကုလားကပြားမများ ၊ အသားလတ်သော ကုလားမများကိုသာ လိုးခဲ့ဆော်ခဲ့ရသည့်အတွက် ကျော်မိုးသည် အသားဖြူဖြူဝင်းဝင်း တရုတ်မကို လိုးချင်သည့် စိတ်တွေ ပြင်းပြလာခဲ့သည်..။ သူကျင်လည် ကျွမ်းဝင်ရာနေရာများတွင် ကုလားမများနှင့် ကုလားကပြားမများသာလျင် ရှိနေရာ ကျော်မိုးအဖို့ လိုလားချက် ဆန္ဒ မပြည့်နိုင်ပဲ ရှိနေခဲ့ရာ ၊ အေးအေးဝင်းထံတွင် ဒရိုင်ဘာ အဖြစ် အလုပ်ရနိုင်အောင် အထူးပင် ကြိုးစားကြံစည် ခဲ့ရသည်..။ တရုတ်မစစ်စစ်ဖြစ်သော အေးအေးဝင်းထံတွင် အလုပ်ရနေခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း အေးအေးဝင်းကိုကား လိုးခွင့် မကြုံသေး..ပေ…။
ကျော်မိုးအဖို့လည်း ဘယ်လိုစရမည်မှန်း မသိ ဖြစ်နေသည်..။ ကုလားသူဌေးကတော်များနှင့် ဆိုလျင် ကျော်မိုးအနေနှင့် အထွေအထူး စနေဖို့ပင် မလို..။ အမျိုးသမီးများ ဘက်က စတင်ကာ ခင်းပေးသောလမ်းကို ကျော်မိုးက အသာလိုက်နင်းသွားရုံသာ ရှိခဲ့သည်..။ အေးအေးဝင်းကတော့ ဘယ်လိုမှ လမ်းခင်းမပေးခဲ့သည့်အတွက် ၊ ကျော်မိုးမှာ အခက်တွေ့နေသည်..။ သူအလွန်လိုးချင်နေသော တရုတ်မစစ်စစ်တစ်ယောက်နှင့် နီးကပ်နေပြီ ဖြစ်ပါလျက် လိုးခွင့် မကြုံရသည့်အတွက် ကျော်မိုးမှာ နေ့စဉ်ပင် အလွန်အနေရခက် အထိုင်ရခက်နေသည်..။ အေးအေးဝင်းကို မှန်းဆစိတ်ကူးကာ ဂွင်းတိုက်၍ သာနေခဲ့ရသည်..။ သည်နေ့တွင်တော့ အေးအေးဝင်းကို မုဒိန်းဝင်ကျင့်ရန် ကျော်မိုးက ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်..။
အခါအခွင့်ကလည်း အတော်ကောင်းနေသည်..။ အိမ်တွင် ထမင်းချက် ၊ အစေခံများလည်း မရှိ ။ ခင်မောင်ကျော်ကလည်း အလောတကြီး ထွက်သွားရာ အိမ်ကြီးပေါ်တွင် အေးအေးဝင်းတစ်ယောက်တည်းသာ ကျန်နေခဲ့သည်..။ အိမ်ပေါ်သို့ အသာတက်ကာ အတင်းမုဒိန်းကျင့်လျင် အေးအေးဝင်း ဘာမျှ တတ်နိုင်မည် မဟုတ်..။ ပြီးတော့ မိမိ၏ ကာမစပ်ယှက်မှု ကျွမ်းကျင်လိမ္မာပုံကိုလည်း ကျော်မိုးက အားကိုးအားထားသည်..။ မိမိအတင်းလိုးတာကို ခံရပြီးလျင် အေးအေးဝင်းက စွဲမက်သဘောကျသွားကာ မိမိ၏ အလိုးခံမလေး ဖြစ်လာမည်ဟု ကျော်မိုးက မျှော်လင့်ထားသည်..။ အကယ်၍ မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာပါကလည်း ကိုယ်လွတ်ရုန်းကာ ထွက်ပြေးဖို့လည်း ကြိုတင်ကြံစည်ထားသည်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အေးအေးဝင်းကို တော့လိုးဖြစ်အောင် လိုးရမည်..။
ထို့ကြောင့် ကျော်မိုးသည် သူနေထိုင်ရာ ကားဂိုဒေါင်အထပ်ခိုးပေါ်မှ ဆင်းကာ အေးအေးဝင်းတို့ အိမ်မကြီးဘက်သို့ ကူးလာခဲ့သည်..။ ခင်မောင်ကျော်က အလောတကြီး ထွက်သွား၍ သည်အတိုင် ဖွင့်ထားခဲ့သည့် တံခါးမှနေ၍ အိမ်ထဲသို့ အလွယ်ပင် ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်..။ တစ်အိမ်လုံး တိတ်ဆိတ်နေသည်..။ အိမ်အောက်ထပ်ရှိ အခန်းများထဲသို့ လိုက်ကြည့်ရာ အေးအေးဝင်းကို ဘယ်အခန်းတွင်မှ မတွေ့ရပေ..။ နောက်ဆုံးတွင်တော့ အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းများရှိရာသို့ ကျော်မိုးတက်လှမ်းလာခဲ့လေတော့သည်..။
ကျော်မိုး၏ စိတ်ထဲတွင် အတော်ပင် လှုပ်ရှားသွားသည်..။ သူသည် ခင်မောင်ကျော်နှင့် အေးအေးဝင်းတို့၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ တစ်ကြိမ်မျှ မရောက်ဖူးပေ..။ သို့သော် အိမ်အကြောင်း စူးစမ်းလေ့လာထားသူ ပီပီ အိပ်ခန်းတည်နေရာကိုတော့ သိသည်..။ အိပ်ခန်းနား ရောက်သည်နှင့် တပြွတ်ပြွတ် အသံများ ညည်းညူ ရေရွတ်သံများ မောသံများ ကို ကျော်မိုး စတင်ကြားရသည်..။ ခင်မောင်ကျော်များ တစ်ကျော့ပြန်လာကာ အေးအေးဝင်းကို လိုးနေဆော်နေလေပြီလားဟုပင် ကျော်မိုးထင်မိသည်..။ သေချာစေရန်အတွက်သာ ခပ်ဟဟဖြစ်နေသော တံခါးကြားမှ ချောင်းကြည့်လိုက်ရာ….။
ကျော်မိုးမှာ မျက်လုံးပြူးကာ ပါးစပ်ဟပြဲ သွားရတော့သည်..။ သူမြင်လိုက်ရသည်က အေးအေးဝင်းတစ်ယောက် ဗလာကိုယ်လုံးတီးဖြင့် ခုတင်ထက်တွင် ပက်လက်လဲလျောင်းကာ သူမအဖုတ်ကို လက်ဖြင့် ပွတ်ကာ ထိုးဆွကာဖြင့် တစ်ကိုယ်တည်း သောင်းကျန်းချင်တိုင်း သောင်းကျန်းနေမှုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် ထင်ဟပ်နေသော အပြာကား ပြကွက်များပင်တည်း..။ အခြေအနေမှန်ကို ကျော်မိုး ချက်ချင်း နားလည် လိုက်သည်..။ မိမိထင်ထားသည်ထက်ပင် အခြေအနေပိုကောင်းနေကြောင်းကိုလည်း ကျော်မိုး သဘောပေါက်လိုက်သည်.။ ကျော်မိုးသည် ခပ်ရဲရဲပင် အိပ်ခန်းထဲ လျှောက်လှမ်း ဝင်ရောက်သွားသည်..။
တီဗီပေါ်မှ မြင်ကွင်းများကို ကြည့်ပြီး သောင်းကျန်းချင်တိုင်း တစ်ကိုယ်တည်း သောင်းကျန်းနေသော အေးအေးဝင်းမှာ အိပ်ခန်းထဲသို့ ကျော်မိုး ဝင်ရောက်လာသည်ကို မသိသေး…။ အဖုတ်ကို လက်ဝါးစောင်းဖြင့် ပွတ်လိုက် ၊ အစေ့ကို ဆွဲချေလိုက် ၊ စောက်ခေါင်းထဲ လက်ချောင်း ထိုးသွင်းလိုက် ၊ နို့တွေကို ပြန်နယ်လိုက်နှင့် အရမ်းကို ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည်..။ “ ဘယ်လိုလဲ…အေးအေးဝင်း…ဖီလင်တွေ အရမ်း တက်နေပြီလား……” ကျော်မိုးက အသံပြုလိုက်မှပင် အေးအေးဝင်း လန့်ဖြတ်၍ သွားကာ ဗလာကျင်းနေသော သူမ၏ ကိုယ်လုံးကို ဖုးံကာရန် ကြိုးစားသည်..။
ချွတ်ချထားသည့် ထမီကို ကမန်းကတန်းပင် လှမ်းယူသည်..။ “ အဝတ်တွေ ဘာတွေ ဝတ်ဖို့ ကြိုးစားမနေပါနဲ့တော့ ဗျာ…..” ကျော်မိုး၏ အေးစက်စက် ပြောလိုက်သော လေသံက ပိုင်နိုင်လှသည်..။ ထိုသို့ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြောဆိုလိုက်သည့် စကားသည် အေးအေးဝင်း ကို ကျောစိမ့်သွားစေသည်..။ အေးအေးဝင်း မလှုပ်ရဲတော့..။ ထမီကို လက်ဖြင့် ကိုင်ရင်း ကျောက်ရုပ်လို ရပ်နေမိသည်..။ သည်လိုအခြေအနေမျိုး ကြုံရလိမ့်မည်ဟု အေးအေးဝင်း တွေးထင်မထားခဲ့မိ…။ မိမိတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တရုတ်တွေ လုပ်နေမိသည့်အတွက် ယခုလို အပြစ်ဒဏ် ခတ်တာ ခံရခြင်းဖြစ်မည်ဟူ၍လည်း နောင်တကြီးစွာ ရမိသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် ကျော်မိုးကို စေ့စေ့ပင် မကြည့်ရဲ..။
မိမိဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေသည့်အချိန်တွင် ဒရိုင်ဘာရောက်လာကာ အားလုံးသိမြင်သွားရလေပြီဟူသော အသိက အေးအေးဝင်းကို အရှက်ကြီး ရှက်နေစေသည်..။ အေးအေးဝင်း၏ စိတ်ထဲတွင် သည်အိပ်ခန်းထဲတွင် ကျော်မိုး ရှိမနေဟူ၍ အတင်းပင် မဲတင်းကာ တွေးကြည့်သည်..။ သို့သော် အဝတ်အစားများ ချွတ်နေသည့်အသံများက ကျော်မိုးရှိနေကြောင်း ဖော်ကျူးနေကြသည်..။ ထို့ပြင် ကျော်မိုးက မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယခုလို အဝတ်တွေ ချွတ်နေသည်ဆိုခြင်းကို စဉ်းစားမိပြန်ရာ အေးအေးဝင်းမှာ မျက်နှာပင် မထားတတ်တော့အောင် ဖြစ်ရလျက် ခေါင်းကိုသာ အတွင်ငုံ့နေမိတော့သည်..။
မိမိအနေဖြင့် ကျော်မိုးကို ဘယ်လိုမျှ ဆန့်ကျင်ငြင်းဆန်ခြင် မပြုသာ..။ ကျော်မိုး၏ လက်ခုတ်ထဲက ရေဖြစ်သွားရတော့မည်ကို အေးအေးဝင်း ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်လိုက်သည်..။ သူမ၏ အိပ်ခန်းသည် ရုတ်တရက် သံလှောင်အိမ် အကျဉ်းခန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသလို အေးအေးဝင်း ခံစားရသည်..။ သူမအနေဖြင့် သည်အိပ်ခန်းထဲမှ ဘယ်လိုမှ ရှောင်တိမ်း ရုန်းမထွက်သာတော့..။
ကျော်မိုးသည် ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းရှိ အဝတ်များကို ချွတ်ပစ်ကာ အောက်ပိုင်းတွင် ဝတ်ထားသည့် ဘောင်းဘီရှည်သာ ကျန်တော့သည်..။ ကျော်မိုးသည် ဘောင်းဘီရှည်ကို မချွတ်သေးပဲ ကြောက်လန့်စွာ ရပ်နေရှာသည့် အေးအေးဝင်းထံ ချဉ်းကပ်လာသည်..။ အေးအေးဝင်းသည် သူမ၏ အသားဆိုင်များကို တတ်နိုင်သမျှ မပေါ်လွင်ရလေအောင် ခပ်ကုတ်ကုတ်လေး ရပ်နေသည်..။ သို့သော် ကျော်မိုးအနေနှင့်ကား တရုတ်မစစ်စစ်လေးတစ်ယောက်၏ ဗလာကျင်းနေသော ကိုယ်လုံးကို မြင်နေရသည်ကပင် စိတ်ရိုင်းတွေကို နိုးကြွနေစေသည်..။ အသားမည်းသော အသားညိုသော ကုလားမများ..၊ ကုလားကပြားမများ၏ ကိုယ်လုံးတီးများကိုသာ မြင်ခဲ့ရဖူးသော ကျော်မိုးအဖို့ တရုတ်မစစ်စစ်လေး၏ ဖြူနုနေသော ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်သည် မက်မောဖွယ်ရာပင်…။ အေးအေးဝင်းသည် ငြိမ်သက်စွာ ရပ်နေသည်..။ ခေါင်းကိုလည်း ငုံ့ထားမိသည်..။
ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်တို့ကြောင့် အသက်ရှူပြင်းနေရာ သူမ၏ မို့ဝန်းလုံးအိသော ရင်သားအစုံသည် နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်နှင့် လှုပ်ရှားနေသည်..။ “ နင် နှာထ နေတာ မဟုတ်သလိုလို ဘာလိုလို ဟန်ဆောင်မနေနဲ့…တရုတ်မ..၊ နင့်ကိုယ်နင် ဘာတွေလုပ်ပြီး ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ငါ ကောင်းကောင်းကြီး မြင်ရပြီးပြီ…၊ နင့်ဖာသာ နင် တစ်ယောက်တည်း စိတ်ဖြေနေတာထက် ကောင်းတာကို ငါလက်တွေ့လုပ်ပြမယ်….၊ ဒီတော့ အိုက်တင် ခံမနေနဲ့တော့…။ ကဲ…ငါတို့ လိုးကြရအောင်….” ကျော်မိုးသည် ခါတိုင်းဆိုလျင် အေးအေးဝင်းကို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံသည်..။ ယခုတွင်တော့ မိမိဘက်က အပိုင်အနိုင် ကိုင်ထားမိပြီဖြစ်ကြောင်း ရိပ်မိသည့်အတွက် တမင်ပင် ရင့်ရင့်သီးသီး စကားလုံးများ သုံးကာ ပြောသည်..။ ထိုသို့ပြောရင်း ကျော်မိုးသည် တရုတ်မလေး အေးအေးဝင်းကို ဆွဲဖက်သည်..။
ထိုအခါတွင်မှ အေးအေးဝင်းသည် လျပ်စစ်ဓါတ်ဖြင့် အတို့ခံလိုက်ရသလို လှုပ်ရှားသွားသည်..။ ကျော်မိုး၏ ဆွဲဖက်မှုမှ လွတ်အောင် အတင်းပင် ကန်ကျောက် ရုန်းထွက်သည်..။ သူမ၏ ရုန်းကန်မှုများသည် ဘာမျှ အရာမရောက်တော့..။ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ဂျူဒိုပညာ အတော်အသင့်တတ်ထားသူ ကျော်မိုးက ရုန်းကန်နေသော အေးအေးဝင်းကို ကောင်းကောင်း ချုပ်ထိန်းထားနိုင်သည်..။ အေးအေးဝင်းခမျာ ကျော်မိုး၏ ရင်ခွင်ထဲတွင် ကော့ကော့လေး ရောက်သွားသည်..။ လုံးဝန်းစူကြွနေသော ရင်သားနှစ်မွှာသည် ကျော်မိုး၏ ရင်ဘတ်ကျယ်ကြီးနှင့် အိခနဲ ထိကပ်မိသည်..။ ထိုသို့ ထိတွေ့မှုကြောင့် အေးအေးဝင်းတစ်ကိုယ်လုံး ကြက်သီးတွေ ထကာ နို့သီးခေါင်းလေးများ ကော့ချွန်လာကြသည်..။ အေးအေးဝင်းမှာ အလိုလိုနေရင်း မောဟိုက်လာကာ ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်နေရတော့သည်..။ ရုန်းဖယ်ထွက်ရန်ပင် အားမရှိတော့…။
“ ဟင့်အင်း….ဟင့်အင်း…..” အေးအေးဝင်းသည် သူမ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးကို ကျော်မိုး၏ ရင်ခွင်ထဲမှ တွင်တွင် လူးလွန့်နေရင်းက ငြင်းဆန်နေသည်…။ “ ကျမကို လွှတ်ပါ….ဖယ်ပါရှင့်….၊ အို…အို..တော်ပါတော့ရှင်……ဒီ….ဒီ လိုမလုပ်ပါနဲ့….ဒါ..ဒါ အတင်း မတရား မုဒိန်းကျင့်တာ…ပဲ…ဖယ်..ဖယ်……..” အေးအေးဝင်းက ပါးစပ်မှ အတင်းကြိုးစားကာ ပြောဆိုငြင်းဆန်သည်..။ “ နင်ကတော့ မုဒိန်းကျင့်တာလို့ ခေါ်ချင်လိမ့်မယ်….၊ ငါ့အနေနဲ့ကတော့ လိုးတာပါပဲ..ဟဲဟဲ……” ကျော်မိုးက ရယ်မော ပြောဆိုသည်..။ ထိုအချိန်တွင် ကျော်မိုး၏ လက်တစ်ဖက်သည် အေးအေးဝင်း၏ ကားစွင့်အိစက်သော တင်ပါးဆုံကြီးကို အားရပါးရပင် ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေသည်..။ ဖင်းသားကြီးနှစ်ခုအကြားတွင်လည်း လက်ညှိုးကို ထိုးထည့်ထားသည်..။
“ နင့်ကို ငါရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ်….၊ တကယ်တော့ မုဒိန်းကျင့်တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး…. မိန်းမတိုင်း အလိုးခံချင်ကြတာချည်းပဲ….၊ ဒါပေမယ့် စိတ်ရှိတိုင်း အလိုးခံလို့ မသင့်ဘူးထင်တာကြောင့် မုဒိန်းကျင့် ခံရသလေး…ဘာလေး ပြောကြတာ…၊ နင်လည်း အတူတူပါပဲ…လေ..၊ နင့်စောက်ဖုတ်မှာ အရည်တွေ ရွှဲပြီး အလိုးခံချင်လွန်းလို့ ရွစိရွစိ ဖြစ်နေတာ နင်လဲ အသိပဲ…၊ ဒီတော့ ရုန်းမနေစမ်းပါနဲ့….၊ အလိုးခံမှာသာ ခံစမ်းပါ…၊ တရုတ်မရဲ့….” ဒရိုင်ဘာဖြစ်သူ၏ ကြမ်းတမ်း နင့်သီးစွာ တစ်တစ်ခွခွ ပြောလိုက်သည့် စကားများကြောင့် အေးအေးဝင်းမှာ အလွန်ရှက်ပြီး အလွန်လည်း တုန်လှုပ်သွားသည်..။ သို့သော် ကျော်မိုး ပြောသလို သူမသည် အလွန်ပင် အလိုးခံချင်ကာ အဖုတ်ထဲတွင် အရည်ကြည်တွေ ရွှမ်းရွှမ်းဝေကာ စိုရွှဲနေရသည်ကလည်း အမှန်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အေးအေးဝင်း မငြင်းနိုင်…။ ဝန်ခံရပေမည်….။
ဗီဒီယို အပြာကားကြည့်ရင်း တက်ကြွခဲ့သော အေးအေးဝင်း၏ ကာမရမက်ဆန္ဒသည် လင်ယောက်ျား ခင်မောင်ကျော်နှင့် မစို့မပို့ စခန်းသွားခဲ့ရမှုကြောင့် ထိန်းမနိုင် တော့အောင် ဆူဝေကြွတက်ကာ အဖိုဓါတ်ကို အလွန်အမင်း လိုလား တမ်းတနေကြသည်..။ ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်၏ ထိတွေ့မှုကို အာသာငမ်းငမ်း စောင့်လင့်နေကြသည်..။ ဒါကိုလည်း အေးအေးဝင်းက နားလည်သည်..။ ထိုရမ္မက်စိတ်များ၏ လှုံ့ဆော်လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အေးအေးဝင်းခမျာ အတင်းရုန်းကန် ထွက်လိုလျက်နှင့် မစွမ်းသာ..။ ကျော်မိုး၏ အပြုအမူ အကိုင်အတွယ်များကို မလိုလားပါပဲနှင့် မငြင်းသာပဲ ဖြစ်နေရရှာသည်..။ ကျော်မိုးကတော့ အလွန်ပင် လက်သွက်နေသည်..။ ဖက်ပွေ့ထားသော အေးအေးဝင်းကို စောစောကပင် သူ့လင်နှင့် စိတ်တူကိုယ်တူ အပျော်ကျူးခဲ့ရာ ခုတင်ပေါ်သို့ ပွေ့တင်လိုက်သည်..။
“ ဟင့်အင်း…..ဟင့်အင်း…..လွှတ် လွှတ်…..ကျမကို လွှတ်……” အေးအေးဝင်းသည် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားငြင်းဆန်နေရှာသေးသည်..။ “ နင်က အေးအေးသက်သာ လိုးတာကို မကြိုက်ပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်း အတင်းကျင့်တာမျိုးကို သဘောကျတာကိုး…။ ရပါတယ်….ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် နင်က ငါ့ကို လိုးပေးဖို့ နောက်ဆုံးမှာ တောင်းပန်ရမှာကတော့ သေချာပါတယ်…..” အေးအေးဝင်း၏ ငြင်းဆန်ရုန်းကန်နေမှုများကို ကျော်မိုးက ဒေါသမထွက်မိပေ….။ သူသည် မိန်းမအတော်များများကို လိုးခဲ့ဖူးရာ နှာထန်နေသော မိန်းမများသာ ဖြစ်ပြီး ထိုအမျိုးသမီးများ၏ ရမ္မက်ဇောကို သူကပါဝင်ဖြည့်တင်းပေးရသည့် သဘောမျိုးသာ ဖြစ်ခဲ့သည်..။ ယခုမူ ငြင်းဆန်ရုန်းကန်နေသော အေးအေးဝင်းကို အပိုင်အနိုင် ကိုင်ကာ အရလိုးရမည်မို့ တစ်မူထူးနေသည်..။ ကျော်မိုး၏ လက်တစ်ဖက်က စောက်ဖုတ်ပေါ် ရောက်လာသည်..။ အကွဲကြောင်းအား လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့် မွှေသည်..။
“ တော်ပါတော့….ရှင်….တော်ပါတော့………အို……အဟင့်…..” စောက်ခေါင်းထဲ လက်ချောင်း လျှောခနဲ ဝင်သွားရာ..အေးအေးဝင်းခမျာ ကောင်းကင်ပေါ်မှ ကျလာသယောင် ခံစားရကာ ရင်ထဲ အေးခနဲ ဖြစ်သွားသည်..။ ကျော်မိုး၏ ကျင်လည်သော လက်များက စောက်စေ့ကို ဆော့ကစားလာပြန်သည်…။ ပွတ်ချေပေးသည်..။ အေးအေးဝင်းမှာ ဖင်တရမ်းရမ်း ရင်တကော့ကော့နှင့် ရမ္မက်သွေးတွေ ဆူဝေလာသည်..။ ပါးစပ်မှလည်း တဟင်းဟင်း အသံများ မြည်လာသည်..။ သတိတစ်ချက် လွတ်သွားသည်နှင့် ရမ္မက်ဇော အာရုံနောက် သွေးသားများ ပါဝင်သောင်းကျန်းကုန်ကြသည်…။
အေးအေးဝင်းသည် ဤအဖြစ်ကို နားလည်ကာ အားတင်းလျက် ရုန်းကန်ပြန်သည်….။ နှုတ်ခမ်းအား သွားဖြင့် တင်းတင်းကိုက်ထားရာ သွေးပင် စို့လာသည်..။ သတိလွတ်ကာ ရမ္မက်ဇောတွေ ဟုန်းခနဲ တက်ကြွမလာအောင် အားတင်းကာ နေရသည်..။ တရုတ်မလေး၏ နှုတ်ဖျားမှ တဏှာရမ္မက်ကြွသံ တဟင်းဟင်း စတင်ပေါ်လာသည်နှင့် သည်ပွဲတွင် မိမိ အောင်မြင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကျော်မိုး သဘောပေါက်သွားသည်..။ ခဏအကြာတွင် အေးအေးဝင်းက ရုန်းကန် ငြင်းဆန်လာပြန်ရာ အိနြေ္ဒဆည်နိုင်ရန် အားခဲ၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုလည်း ကျော်မိုးက အကဲခတ်မိလိုက်လေတော့သည်………ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged နှာထခငျြကွတာ